သစ္စာအလင်း: February 2009
ရှင်းသန့်စင်ကြယ် မှုကို ဘယ် လောကစည်းစ်ိမ်နဲ့မှ မလဲလှယ် မိပါစေနဲ့
အခုမှတရားအားထုတ်မယ် ဆိုရင် သည် နည်းနဲ့ ပဲအားထုတ်မယ် ဆိုပြီးတရားကို ကြိုတင်ပြီးတရား နှုတ်ခမ်းမသတ်ဘို့တော့ လို အပ်မယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်..။ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာ ဓိက ကလည်းဟော ကြားဘူးပါတယ်..။ ကိုယ်သည် ဘယ် ဆရာသမားဟောပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်း၊ နည်း လမ်းနဲ့ တရားရမည် ဆို တာ ကို ကြိုတင် မသိရှိနိုင်ပါတဲ့..။
ဒါကြောင့်တရားဆိုရင် ကိုရင် လေး ဟော ကြားသည့်တရားဖြစ်စေကာမူ ဘုရားဟော တရားကိုပြန်ဟော တာရယ်လို့ ဘုရားကိုအာ ရုံပြု ပြီးရိုရို သေသေနှလုံးသွင်းဘို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကား တွေကို လည်းကြားနာ ဘူးလေတော့ ကျွန်မ သည် တရားဆိုလျှင် ဘယ်သူ ဟော သည် ဖြစ်ပစေ အကုန် နာ ယူပါတယ်..။
ဣနြေ္ဒ စရိုက် သူ့ အကြိုက် ကို နှိုက် ချွတ်စုံလင် အကုန် မြင် သဗ္ဗဉ် ဉာဏ် တော် အစွမ်းတည်းဆို တာလို ဝေနေယျ တို့ရဲ့ အစ္ဇျာသယကို သိ နိုင် တာ ဘုရားတစ်ပါးသာရှိပါတယ်..။
အရှင် အနုရုဒ္ဓါ မထေရ် မြတ်ကြီးသည် ရဟန္တာ မဖြစ်သေးခင် ကာလ တစ်ခုမှာ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားကြတဲ့ အရှင် မြတ်တွေကို ကြည့် ပြီး သူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကာ စဉ်းစားပါတယ် တဲ့..။ ဘာကြောင့်ငါ မတာ သေးတာပါလဲဆိုတာ ရှာ ဖွေလို့ မရတာ ကို ဘုရားက သိတော် မူတဲ့ အတွက် တန်ခိုးတော် နဲ့ နားနားကပ် ပြီးဟောကြားတော် မူပါတယ်။
ချစ်သား ဤကားသင့်အရာ မဟုတ်၊ဘုရားအရာ သာ ဖြစ်တယ် သင့်စိတ်ကို လွတ်မြောက်တဲ့ ဓာတ်မှာ ပျော် အောင် ကျက် စားနိုင်ဘို့ ထားနိုင် ဘို့သာ လိုတယ် လို့ ဆုံးမ တော် မူပါတယ်..။
ဝိပဿနာ ဆိုတာ စိတ် အလုပ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် နေရာသီးသန့် သတ် မှတ်ချက် တွေ လိုအပ် မနေပါဘူး။တရားရိပ်သာ တွေ ဆို တာ ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ဣန္ဒြ စရိုက် နဲ့ ကိုက် ညီတဲ့ ဆရာကောင်းတွေဆီမှာ နည်းခံပြီး အားထုတ်ရတာ ကတော့ ပထမ ကျင့်ဆောင်ရမဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ..။ကိုယ့်ဘာ သာ ကိုယ် ကျင့်ပြီးသစ္စာလေးပါးကို သိမြင်နိုင်တာ ကတော့ ဘုရားနှင့် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ၂ပါးသာရှိပါတယ်..။
မြန်မာ ပြည် ဆိုတဲ့ သံဃာ ရတနာတွေ ၊ရဟန္တာအရှင် မြတ် များစွာပေါ်ထွက် ခဲ့တဲ့ နေရာ မှာ မွေးဖွားလာ ရတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆုလာဘ်ရတနာတစ်ခုပါ..။အဲ ဒီအခါ ဆရာကောင်းတွေထံမှာ နည်းခံအားထုတ်ရေးဟာ လက် လှမ်းတမှီ အတွင်း အသင့်ရှိနေပါတယ်..။
အားထုတ်တဲ့ အခါ..ဝိပဿနာ ကျင့်စဉ်ကြောင့် လွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာကို ခံစားဘူးတယ်..။ကောင်းမှန်းလည်းသိတယ် တန်ဘိုးလည်းထားတတ်တယ်..။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ကျင့်စဉ်မှာ စိတ်ကို ပျော် အောင် မထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက် ကို သွားတွေ့ပါတယ်..။ ပျော် အောင် ထားနိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင် အရှင် အနုရုဒ္ဓါ ကို ဟော ကြားခဲ့ တာ နဲ့ ကိုက် ညီနေမှာပါနော်..။
စိတ် ကို ထို ကောင်းသောအာရုံမှာ ပျော်အောင် အထိုင်ကျအောင် မထားပဲ ခဏ ခဏ အပြင်ထွက် ကြည့်မိ တတ်တာ ကြောင့်ပါ..။အပြင်ထွက် ကျက်စား ပူရင် တစ်ခါပြန် ဝင်၊ အေးသွားရင် ပြန်ထွက် နဲ့ မစွဲ မြဲ ခဲ့တာ ကျွန်မ ကိုယ် ကို ကျွန်မ သွားတွေ့ ပါတယ်..။
ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာလိုနေတာ လဲ... အဓိက က သံဝေဂ လိုနေတာ ပါ..။အဲဒီ သံဝေဂ ကထာ အတွက် ကျေးဇူးတော် ရှင်မြတ်စွာဘုရားက အဘိဏှသုတ် ကို ဆင် ခြင်ဘို့ ဟော ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဝိပဿနာ ဆိုတာ စိတ် အလုပ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် နေရာသီးသန့် သတ် မှတ်ချက် တွေ လိုအပ် မနေပါဘူး။
ရှေ့ စိတ် သည် နောက် စိတ်၏ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊
ရှေ့ အသေကို နောက် အနေနဲ့ ရှုတာ၊
ရှေ့စိတ်ကို နောက် စိတ်နဲ့ရှုတာ၊
ရှေ့နာမ် ကို နောက် ဉာဏ် နဲ့ ရှုတာ လို့ ကျေးဇူးတော်ရှုင်မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ဘုရားအလိုကျ မိန့်ကြားခဲ့တာပါ..။
ဒါဆိုရင် မအားလို့ပါ ဆို သူများအတွက် ကျေးဇူးပြုစေနိုင်မဲ့ ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ စိတ်ရှိရင် အားထုတ်လို့ရတာ ပဲကိုး။ ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာ ဓိက က ဆိုရင် မှတ်မိလွယ်အောင်( နှာ ခေါင်းရှိရင် အလုပ် ဖြစ်တယ်) လို့ စကားလုံး အသွက်ကလေးနဲ့ ထက် ထက် မြက် မြက် ကလေး သတိ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
သည် စကားလုံးလေးဟာ ဘုရားကျောင်း ကန် စေတီ ပုထိုးမရှိ၊ ဗုဒ္ဓဘာ သာ မြန်မာ ဘုန်းတော် ကြီးမရှိ၊ တရားရိပ်သာ မရှိ၊စကားပြောစရာ မြန်မာ တစ်ဦးတလေမှမရှိသော မြို့လေးမှာနေရာ သူ အတွက် တော့ အကြီးမားဆုံးအားကိုးရာ ကို လက် ညှိုးညွှန်ပြနေသလိုပါပဲ..။တကယ်လည်းအားကိုးခဲ့ရပါတယ်..။
အရှုဉာဏ် ဆိုတာ ကလည်းတကယ် တော့ ငါမှ မဟုတ်တာ..။ မိမိရဲ့ စိတ်တည် တဲ့ နှလုံးအိမ်မှာ ပညာအလင်း(တနည်း)ပညာ စေတသိတ် ယှဉ်တဲ့အခါ လွတ်မြောက်ရာမှာ ပျော် ပါတယ်.။ မော ဟအမှောင်(တနည်း) မော ဟစေတသိတ် ယှဉ် တဲ့ အခါ ကျင့်စဉ်ကို ခဏချ လွတ်မြေက် ရာ ကထွက်ပြေးတတ်ပါတယ်..။
အဖြေကတော့ မောဟအမှောင် ခွင်းတဲ့ဓါတ် ပညာ အလင်း ယှဉ်တဲ့ သတ္တိ ကို စိတ်မှာ ကျက်စား ပေးရမှာပါ။
စိတ် အစာစားသလို ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်မ ပထမ Post တွေမှာလည်းရေးခဲ့ဘူးပါသေးတယ်..။သံဝေဂများစွာနဲ့ အစင် ကြယ် ဆုံး စိတ် ကို ထည့်သွင်းကျက်စားပေးနေမှသာ ပညာ အလင်း ထွက် လာ မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
စိတ် သည် မကောင်းမှုမှာ မွေ့လျော်တတ် သော်လည်း မိမိစိတ်ကို မိမိမနိုင်တာ ဟာ စိတ်အစာ မှားထားတာ တွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ပါပဲ.။အမေရိကားက ရုပ် ရှင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ပြောဘူးတာ သွားအမှတ်ရတယ်..။
အမေရိကားမှာ စိတ်မကျန်းမာ တဲ့လူတစ်ချို့က အဓိပ္ပါယ် မဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်သွား တဲ့ သတင်းတွေကြားရတိုင်းသူဟာ အပြစ်မကင်းသလိုခံစားရပါတယ် တဲ့။အကြမ်းဖက် ရုပ် ရှင် တွေမှ တစ်ဆင့် စိတ်အစာ မှားကျွေးနေမိတာ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
တကယ် ဝိပဿနာ အာ ရုံမှာ ပျော် ဘို့ကတော့ ကျွန်မတို့စားရမဲ့ စိတ်အစာမမှားဘို့ပါပဲ။ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားအဘိဏှသုတ်မှာ ဟော ကြားခဲ့တဲ့ သံဝေဂ ဉာဏ်ကို များများ ကျက်စား ပေးရမှာ ပြဿနာ ရဲ့ Solution ပါပဲ..။
၁။အိုခြင်းတစ်ဖြာ= မိမိသူတစ်ပါး အကုန် စိတ်ထဲ အိုကြည့်ရမယ်..မှန်ထဲမှာ ငါ နုသေးတယ် ဆိုရင် မှားပြီ..။
၂၊နာခြင်းတစ်ထွေ= မိမိသူတစ်ပါး၊နာတတ်တယ်ကွဲ့၊ အဆန်းမဟုတ် ၊
၃။သေခြင်းတစ်ခြား=မိမိသူတစ်ပါး၊ အထူးအဆန်းမဟုတ်၊ ဤလမ်းမှတစ်ပါးအခြားမရှိ။
၄။ကွဲပြားတစ်တန်=ချစ်ကြင်သူနှင့် အတူတကွ မပေါင်းရပဲ လွမ်းတပူဆွေးသူနဲ့ဝေးသော်...(နိယမတရား)ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သက်ရှိ သက် မဲ့ တွေနဲ့ ကွဲပြားတတ်တယ်..။ ကျွန်မတို့က မကွဲပြားအောင်အားထုတ်တယ်..စိတ်ကျက်စားတယ်..။မှားနေပြီ..။
၅။ကံလျင် ဥစ္စာ= စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းတွေကိုရပ်တန့်စေခဲ့တာ..မိမိရဲ့ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန် ကံ အကျိုးပေးနဲ့ ထိုက် သင့်သော ဥစ္စာ ကို သာ ရလိမ့်မပေါ့..။လက် ရှိ အခြေအနေကို အားမရတဲ့ စိတ်ကျက်စားမှုများ ရပ် တန့်သွား ရမယ်..။
ဘုရားရှင် က ဤသို့ စိတ်ကျက်စားခိုင်းတယ်..အဲလို ကျက်စားရင် ပညာ အလင်း။ ကျွန်မတို့က ပြောင်းပြန် ကျက်စားတယ် မောဟအမှောင်၊ ပညာ ဉာဏ်အလင်း (တနည်း)ပညာ စေတသိတ်သည် စိတ်နှင့် ယှဉ် ၍ နေတာစိတ်အစားစားမှန်တာပေါ့(စိတ်ကို မှီတွယ် စိတ်ကိုချယ် မှတ် ဖွယ် စေတသိတ်)လို့ အဘိဓမ္မာမှာဆိုထားပါတယ်..။
ထိုသို့တည်တဲ့ နှလုံးအိမ်မှတဆင့် သွေးသားချဉ်ဆီမှာ သတ္တိကိန်းမှာပါ..။တစ်ကိုယ် လုံးသွေးတစ်ပတ်လည် ဘို့ ၂မိနစ်ခွဲ ကြာပါတယ် တဲ့။ လည်ပတ်ပြီး သွေးသားချဉ်ဆီမှာ တိတ်ခွေ ဖမ်းသလို သတ္တိကိန်းသွားပါတယ်..။အဲလို ကိန်းမှသာ ဝိပဿနာ အာရုံမှာ အမြဲပျော် မှာ ပါ..။
ကျွန်မ သည် Blog ကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာကလည်း သူများမဖတ် တောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကို အစင်ကြယ် ဆုံးအစာ ကိုထည့်သွင်းကျက်စားပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးကတော့ အသေအချာ ပဲဆို ပြီးရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ရာ နှုန်းပြည့်သည် အထိ.လည်း ကြိုး စားနေပါတယ်လေ..။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်မဘဝရဲ့ Motto လေးကို (Simplify my life, purify my mind )လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာ ပါ..။ (ရှင်းသန့်စင်ကြယ် မှုကို ဘယ် လောကစည်းစိမ်နဲ့ မှ မလဲလှယ်မိပါစေနဲ့ )လို့ ကိုယ့်ကို ကို သတိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:11 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
ဝိပဿနာ တရားကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ သံဝေဂဉာဏ် မပါပဲမကောင်းနိုင်။ ကျွန်မတို့ ဓမ္မမိတ် ဆွေများနှင့်လည်း သည် သံဝေဂအကြောင်း ကို မကြာသေးခင်ကမှပြောဆိုနေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်..။ကိုဝင်းမြင့်ဇော် ကတော့အထက် မဂ်ကို လှမ်းတက် ဘို့လှေကားတစ်စင်းပါတဲ့..။
စွဲမြဲစွာ အားထုတ်ဖြစ်ဘို့ကတော့သံဝေဂသည် နက် ရှိုင်းသော သံဝေဂဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်…။ မဟုတ် လို့က တော့ ဦးစားပေးအဆင့် မဟုတ်ပဲ ကျောင်းပိတ်မှ လုပ်ရတဲ့၊ ရုံးပိတ်မှ လုပ်ရမဲ့ အပို ဝန်ဆောင် မှုတစ် ခုလို ၊ နွေရာသီကျောင်းပိတ် ဖက် ရှင်လို ကျင့်သုံးနေတတ်ကြပါတယ်..။
ကျွန်မသည်မနေ့ကကျေးဇူးတောရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ယောဂီဟောင်းတရားတိတ်ခွေအမှတ် (၁) ကို နာ ယူမိလို ကြားသိရတဲ့ သံဝေဂ တရားကို ပြန်ရေးပြချင် မိပါတယ်..။
သံဝေဂ ဉာဏ် နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားသည် ကောသလ မင်းရဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ ညီအစ်ကို တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီ ညီနောင် ၃၀ ကို ဟော ကြားခဲ့ ဘူးပါတယ်..။
သူတို့တွေဟာ ပထမ အကြိမ်တရားဟော ပြီးချိန် မှာ အနာဂါမ်ထိ ဖြစ်ပြီးသားပါ.။အခြေခံသိ ပြီးသားတွေ ဒေါသလည်းသိမ်းနိုင်တယ် ၊ဒါပေမဲ့ဘာ လို့ ရဟန္တာ မဖြစ်ကြ သေးတာ လည်းလို့ ဆင် ခြင် ကြည့်တဲ့ အခါ..သံဝေဂ ဉာဏ်လို နေတာ ကို ဘုရားရှင်က သွား တွေ့ရပါတယ်..။သဘော ပေါက် ရက် သားနဲ့ အထိုင် မကျသေးတာ.။ နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သိတယ်အရဟတ္တ ကျင့်စဉ်မှာ အထိုင် မကျသေးတာ..။
အချိန်နဲ့ ပတ်သက် ပြီးမှားနေတာ အများကြီး…အများကြီးနေရအုံးမယ်ထင်ထားတာ သည် အမှားကြောင့်ဆိုတာ သိတော့ဘုရားရှင်က ဘဒ္ဒဝတီ ညီနောင် (၃၀) ကို အဲဒီအခါ သံဝေဂ ဉာဏ်ရစေဘို့ တော အုပ် တစ်ခုခေါ်သွားပြီး ဘုရားရှင် က သံသရာရဲ့သက်တမ်းကို တွက်ပြတော်မူပါတယ်..။ အချိန်ကို ဆန်း စစ်ပြတော်မူပါတယ်..။
ဘုရားရှင်က ချစ်သားတို့်သံသရာ သက် တမ်းဟာ အသင်္ချေပေါင်း အနန္တ ရှိပါတယ်လို့ဟော ကြားတော် မူပါတယ်..။
တစ်သင်္ချေ..ဆိုတာ ၁ နောက် မှာ သုည အလုံးပေါင်း၁၄၀ဆိုတဲ့ ဂဏန်းပမာဏ ရှိပါတယ် ၊ နှစ်တွေ မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာ တွေနော်။တစ်ကမ္ဘာ ဆိုတဲ့ ကာ လ က ဘယ် လောက် ကြာလည်းဆိုတော့ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် ၁၃ မိုင် ရှိတဲ့သံကန် ကြီးကို မုံညှင်းစေ့ တွေ ထည့်မယ်.၊ထို မုန် ညှင်းစေ့ များထဲမှနှစ်တစ်ရာ မှာ ၁စေ့ယူ ပြီး ဖယ် မယ်..။
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ဟာ တစ် ကမ္ဘာ..ဖြစ်ပါတယ်..။ ဤကဲ့သို့ ကြာညောင်းလှစွာ ၊ များပြားလှစွာ သော ဘဝတွေကို ကျင်လည်ကျက်စားပြေးလွှားခဲ့ရပါတယ်လို့ ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ်စွာဘုရားကဥပမာ ဆောင် ပြတော်မူပါတယ်..။
လူ့ဘဝ၊ တိရိ စ္ဆာန်ဘဝ၊ ငရဲ ပြိတ္တာ ၊အသူရကာယ်၊ နတ် ၊ဗြဟ္မာ အစုံ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာ တွေထဲက ကမ္ဘာ ပေါင်း များစွာ မှာလူကို ဖယ် ထား၊ တခြားဘဝတွထား နွားဘဝ။ အဲဒီ နွားဘဝ ထဲ မှာ ပဲ အနက်၊ အနီ၊ အညိုတွေ ခဏဖယ်ထားပါ။
နွားအဖြူဘဝနဲအဖြူဘဝနဲ့ ခေါင်းဖြတ် အသတ် ခံရလို့ကျ ခဲ့တဲ့ သွေးတွေ ပေါင်းထားမယ် တဲ့။
ချစ်သားတို့ ကမ္ဘာသေးသေးလေးမှာ ရှိတဲ့ ပင် လယ်ရေနဲ့ ကျခဲ့တဲ့ သွေးထုထည် နှိုင်းယှဉ် ရင် ဘယ် ဟာ များမလဲလို့မေးပါတယ်..။လွယ် လွယ် နဲ့ ဖြေလို့ မရဘူးနော် နက် နက် ရှိုင်းရှိုင်း တွေးပြီးဖြေကြရပါမယ်ဆို တော့ သွေးက များသွားမယ် လို့ ဖြေကြရပါတယ်..။
ဘုရားရှင်က မှတ်ရမယ် တဲ့ ဆိတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်..။ကြက် ဘဲ ဝက်၊စသည် ဖြင့် မဖြစ်ခဲ့ဘူးသော ဘဝမရှိပါ..။
လူ့ဘဝမှာလည်းတောလမ်းမှာ သူပုန် တွေ သတ် လို့ ကျ ခဲ့တဲ့ မျက် ရည်တွေ။သေခါနီးမှာ မသေချင်ပဲသေရတော့ ကျတဲ့မျက် ရည်တွေပေါင်းထားမယ်..ဆိုရင် ကမ္ဘာသေးသေးလေးက ပင်လယ် ရေကနည်းပါသေးတယ် တဲ့..။
အဲလို များပေမဲ့ တကယ် ကျင်လည်ရတာ ကတော့ ဂဏန်းသေးသေးလေး …၃၁ဘုံပဲ ရှိတာ။စကားအရ သာ ၃၁ ဘုံနော် အနာဂါမ် ဗြဟ္မာ ကြီးတွေသာ ရောက် ရှိနိုင်တဲ သုဒ္ဓါ ဝါသ ငါးဘုံကို ဖယ် လိုက် ရင် ၂၆ဘုံမှာပဲ ကျင်လည်ရတာ ဆိုတော့အဲလို အစုန် အဆန် ပြေးသွားကျင် လည်ခဲ့ရဘူးသော ဘဝတွေထဲမှာ မဖြစ် ဘူး တာ မရှိ၊
မရဘူးတာ တစ် ခုမှမရှိဘူးတဲ့..။
ဗြဟ္မာ ပြည်ဆိုတာ လည်း မဆန်း၊
နတ် ပြည် ဆိုတာလည်းမဆန်း၊
ရွှေ ငွေ ဥစ္စာ တွေ ဆိုတာ လည်းမဆန်း၊
တိုက်တာ ခြံမြေ၊ကားတွေလည်း မဆန်း
လူချမ်းသာ ဘဝ၊ ဘုရင်မင်းဘဝတွေလည်းမဆန်း၊
သူတောင်းစားဘဝ၊ ပါမောက္ခဘဝ ၊အနူအဝဲ အကျိုးအကန်းဘဝ၊ အချော အလှ ဘဝအကြိမ် ကြိမ် ၊ ဖြစ်ခဲ့ရတာကို သည် တရားမှ တဆင့် ပြန်သိရပါတယ်..။ ဘယ် မှာ စိတ်ကျ ကျ၊ ဘယ် လို ပုံဖော်ပြီးစိတ်ကူးတွေ ယဉ် ယဉ် ရိုးနေပြီ..။ စိတ်ကျက်စားလို့ပျော်စရာနေရာရှာမရနိုင်တော့တာ သံဝေဂဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်...။
ဘယ် ဘဝ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် အိုနာ သေ နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရတာ၊ နောက် ဆုံးအကုန်ထားခဲ့ရတာ..။ပင် ပန်းလှပါ ပြီ…အဲ ဒီ ဆင်းရဲတဲ့ အကြောင်းရင်းက အဝိဇ္ဖာ ကြောင့်လို့ ဟော ကြားခဲ့ပါတယ်..။
လော ကမှာတွေးချင်တာ တွေး။စိတ် ကူးကိုကြိုက် သလို ယဉ် ။ ဣဋ္ဌာရုံ၊ အနိဋ္ဌာ ရုံ မှန် သမျှ သည် အကုန် ဖြစ်ခဲ့ဘူး ပြီ..မဖြစ်ဘူးတာ တစ်ခုမှမရှိ၊ မရဘူးတာ တစ်ခုမှ မရှိ.. မရဘူးတာ နိဗ္ဗာန် တစ်ခုသာ ကျန် ပါတော့တယ်..။
အဲလို အချိန်တွေကို ထည့် မတွက် ပဲ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အဓိက အချက် က အချိန် နဲ့ ပတ် သက် ပြီး အထင် မှာ နေတာ..ကျွန်မတို့လက် ရှိရတဲ့ ဘဝလေးကို အကြာ ကြီးနေရအုံးမယ် ထင် နေတာ။ရှေ့လ မှာ ဘာ လုပ် မယ်၊ နောက် နှစ် အနာဂါတ် တွေ အများကြီး ပုံဖော် ထားတာ အမှား၊ အို နာ သေကို ထည့် မတွက်ပဲ ဘဝထူထောင်ရေးအတွက်ကြိုးစားနေမိ၊ အချိန်များစွာပေးနေမိ ၊အို နာ သေ က ရောက်တော့မယ်..။ တရားစခန်းလေး ၁၀ရက်လောက် ဝင်ပြီးတာ နဲ့တာ ဝန်ကျေစပါးရောင်းပြီးတဲ့ လယ် သမားလို စိတ်ချ လက် ချ လော ကီရေးတွေနဲ့ နပမ်းလုံးဘို့ကြိုးစားကြတဲ့ အထဲ မှာ ကျွန်မလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..။
အတိတ်ကံ အတိုင်း အကျိုးပေးတဲ့အတိုင်း ခန္ဓာဝန်ကို အကျဉ်းဆုံးထားပြီး ကုသိုလ်အပြည့်အဝဆုံးနဲ့ သံသရာဝဋ်ရဲ့ လွတ် လမ်းရှာရတော့မှာအမှန်ပါပဲ..။အဲဒီ အို နာ သေနဲ့ ကံ အကျိုးပေးကို နားလည် ဘို့ ဘုရားရှင် က အဘိဏှသုတ္တန် မှာ ဟော ကြားခဲ့ပါတယ်..။
[အိုခြင်းတစ်ဖြာ ၊ နာခြင်းတစ်ထွေ
ကံလျှင် ဥစ္စာ ၊ ဤငါးဖြာကို
မကွာနေ့ည။ ဉာဏ် သက်ဝင် ၍ ဆင်ခြင် ကြ ]
ကျွန်မတို့တွေ တောထဲက တောသမင်တွေလို..တော ထဲမှာ ပတ္တမြားတွေ့ပါလျက် ကယ် နဲ့ မြက် စား ပြီးပြန်ကြတော့ မှာလား.။ကျွန်မ ကိုယ် ကို မေးဖြစ်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းပါ..ဖြေနိုင်အောင်လည်းကြိးစားနေပါတယ် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:26 PM3မှတ်ချက်ရေးရန်
မနေ့ ကကျွန်မတို့စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများရဲ့ Group Mail ထဲကို စင်္ကပူရောက် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စင်္ကပူဒေါ်လာ တစ်သောင်းကို လှူတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် လက် ခံရရှိခဲ့ပါတယ်..။ Sambawang Singapore မှာတရားစခန်းဖွင့်လှစ် နိုင်ရေးအတွက်ဆရာတော် အရှင် ရာဇိန္ဒ ကို လှူတာ ဖြစ်ပါတယ်.။ပုံလေးထဲမှာ ကြည့်ရတာ ပီတိနဲ့ပျော် နေကြတာ ကောင်းလေစွ ပါ..။
လှူတဲ့ သူ က ကျမရဲ့ တစ်နှစ်ကြီးစီနီယာ ဦးကျော် စိုး၊ဇနီးဒေါ်ဌေးဌေးခင်။သမီးများဖြစ်တဲ့ ဌေးဦးသူ၊ ရည်မွန်စိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကို ကျော်စိုးဆိုတာ ကကျွန်မတို့ကျောင်း တက် တုံးကကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင် ရွက် ခဲ့တာပါ..။ ကညစ်နဲ့ ဖယောင်းစက္ကူမှာရေးပြီး ထုတ်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း လှုပ်ရှားမှုစာစောင်လေးတွေအတူ ထုတ်ဝေခဲ့တာ မို့ သူတို့ရဲ့ အလှူဒါန သတင်းလေးကို ကျွန်မရဲ့ စာမျက် နှာများမှာ မှတ်တမ်းတင်ပေးချင်စိတ်တွေ နဲ့အတူ မုဒိတာတရားပွားများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
ကျွန်မတို့ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ဆိုတာ ကဟိုးအရင်အခါတုံးက တိုက် နယ် ဆေးရုံသာ ရှိတဲ့ ရေဆင်းရွာလေးကို အမှီ ပြုရပ်တည်ရတာ ပါ..။ အခုတော့လည်းနေပြည်တော် ကတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်..။
အဖိတ်နေ့တွေဆို ဗုဒ္ဓသာဘာ အသင်းလှုပ်ရှားမှုတွေ ကဆွမ်းတော်ကြီးအလှူခံထွက် ရတယ်၊ ညဖက် မှာ အဆောင် တွေကို အလှည့်ကျ ဓမ္မစင်္ကြာ လိုက်ရွတ်ကြပါတယ်..။အလှည့်ကျတဲ့ အဆောင် ကဝတ်ရွတ်သူများကို ကျွေးမွေးရပါတယ်..။ညနေ၆နာ ရီ အဆောင် ပိတ် Roll Call ထူးပြီးမှ ညရနာရီ ညထွက် ခွင့်ရပြီး သွားရတာ မို့ အဲဒီတုံးကတော့ အဖိတ်နေ့ တွေဆို သိပ်ပျော်ကြပါတယ်..။
မှတ်မိသေးတယ်..။ရေဆင်းဆိုတာ ကျွန်မတို့ကျောင်းသားအားလုံးကို တစ်သားထဲဖြစ် စေခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။အိမ်မှာ ကားရှိလည်းစီးလို့မှမရတာ.။အားလုံးအဆောင်ကတက် လမ်းလျှောက် အတူတူတစ်သားတည်းဘဝတွေပါပဲ..။အဲဒီတုံးက ကျွန်မ က (တန်းအလွှာ၊ ခဝါချ စေတဲ့ သဘာဝရင်ခွင်) ဆို ပြီး ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဘူးသေးတယ်..။
အဲလို မိဘ နဲ့ဝေးတဲ့ နေရာ မှာ ကျောင်းတက်ရတာ တနေ့မှာ ကို ကျော်စိုးတို့နှစ်က ကို စံထွန်း ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အဆောင်က အခန်းထဲမှာရုတ်တရက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်..။စာ ကြိုး စားသူဆိုတော့ဆေးရုံက ခွင့် မပြုတာ ကို စာမေးပွဲစိတ်မချလို့ပြန်ဆင်းပြေးလာတာ..အဆောင်မှာ ဆုံးရှာတယ်.။
ကင်းတားဆောင်ရှေ့မြက်ခင်းပြင်မှာ မဏ္ဍပ်ထိုး၊ အလောင်းပြင် တာတွေကို ကျောင်းကပဲစီစဉ်ရတာ ပါ..မိဘတွေကနောက် မှ လိုက်လာ နိုင်တာပေါ့..မှတ်မိသေးတယ်..။ကျွန်မတို့အသုဘရှိနေတဲ့ ညတိုင်းဝတ်ရွတ်ထွက်ရတာ အဲဒီတုံးကတော့ မပျော်ခဲ့တာ သေချာ မှတ်မိနေခဲ့တယ်..။
မြို့ပြ မဟုတ်လေတော့ အုတ်ဂူကို လုပ်တဲ့ အခါ ဆရာ၊ဆရာမ တွေကြီးကြပ် မှုနဲ့ အတူ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းဝင်တွေ ကိုယ် တိုင်အုတ်စီ၊ပန်းရံကိုင်ခဲ့ရတာ တွေ၊သပိတ်သွတ် ခဲ့ရတာတွေ ဟာ အဲဒီအခါက အသက် ၂၀ မပြည့်တတ်သေးတဲ့ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ မဟာ အတွေ့အကြုံကြီးပါ..။
ဆရာ ဆရာမ တွေဟာ မိဘတာဝန်တွေပါ တစ်ပိုင်းတစ်ကဏ္ဍ ယူကြရတာ ဆိုတော့ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ဆရာ့ကျေးဇူးသိတတ်မှုဟာ တခြားသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေထက် ပိုသိမှတ် နားလည်နေကြပါတယ်.။ နွေးထွေးမှုလည်းပိုပါတယ်။
အခုတော့လည်း ဆယ်စုနှစ် ၃ခုနီးပါးကြာခဲ့တဲ့ အချိန်တွေဟာ ဘဝများစွာကို နေရာတွေလည်းခြားစေခဲ့၊ ရေမြေ တွေလည်းခြားစေခဲ့၊ရပ်တည်မှုတွေလည်းခြားစေခဲ့ပါပြီ..။ဘာသာရေးအသိစိတ်ဓါတ် တူညီစွာ ပြန် မြင်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ရပါတယ်..။
ဓနရဲ့ အနှစ်သာရသည် ကား ဒါန ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့မြင်ရလို့လည်း ဓန အတွက်ကော ၊ ဒါန အတွက်ပါကျေနပ်ရပါတယ်.။ သည် အလှူမှာ Group Email Administrator ကိုသောင်းထွဋ် ကိုလည်း သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးနဲ့ အတူ တွေ့ရတော့ကျက် သရေရှိတဲ့ ဓာ တ်ပုံ တစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။ကျေးဇူးတော် ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ကိုယ့်ဘဝရဲ့ စာ မျက် နှာများ မှာ မိဘ သည် ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ရှိနေရမယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားနဲ့လျော်ညီနေလို့ပါ..။
သည် အလှူလေးကို အကြောင်ြး့ပုပြီးကျွန်မမှတ်ထားဘူးတဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံးဒါနပြုနည်း ဆိုတဲ့ တရားဒါနလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်..။
အလှူ ရှင် တွင် ထားရမဲ့စိတ်သုံးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံရင် မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီး အမြင့် မြတ်ဆုံးအကျိုးကို ပေးကို ရပါတယ်.။
၁။ဝမ်းမြောက် စွာနဲ့ လှူရပါမယ်။
၃။သူတစ်ပါးတိုက် တွန်းမှု မပါပဲ ထက် ထက် မြက် မြက် လှူရပါမယ်။
နံပါတ် ၂ အချက်ကို သိတာ နည်းကြပါတယ်..။ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးလှူတဲ့ အခါမှာ
၁။သာသနာတော် ကို သာ ရည် ရွယ် ပြီးလှူရပါမယ်..။
လှူတာဆိုတော့ အကျိုးပေးဆိုတာ ရှိစမြဲဆိုတော့..
တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုလှူရင် ဘဝတစ်ရာ အကျိုးပေးပါတယ်..။
သီလမရှိတဲ့ လူဆိုရင် ဘဝတစ်ထောင်၊
သီလရှိတဲ့ လူဆိုရင် ဘဝပေါင်းတစ်သိန်း၊
သမထဈာန်ရတဲ့ သူဖြစ်ရင် ဘဝပေါင်းကုဋေ တစ်သိန်း၊
သောတာပန်ကိုလှူရင် ဘဝပေါင်း အသင်္ချေ၊
သကဒါဂါမ် ကို ဆိုရင်သောတာပန်ထက် ပိုပါတယ်၊
အနာဂါမ် ဆိုရင် သကဒါဂါမ် ထက် ပို ပြီး
ရဟန္တာကို လှူရင် အနာဂါမ်ထက် ပို ပါတယ်..။
ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ကို လှူရင် ရဟန္တာ ထက် ပို ပြီး
ဘုရားရှင် ကို လှူရင်ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါထက် ပိုပါတယ်..။
ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်တွေကိုလှူရင်(သံဃိက) အဖြစ်လှူရင် ဘုရားကို လှူ တာထက် ပိုပါတယ်..။
သာသနာတော် အတွက်ရည် မှန်းပြီးလှူရင် (သံဃိက)ကိုလှူတာ ထက် ပိုပြီးအကျိုးများပါတယ်..။
အခု အလှူ ကစင်္ကပူမှာ တရားရိပ်သာ ဖွင့်နိုင်ရေး၊ စင်္ကပူ မှ ဗုဒ္ဓ သာသနာအတွက် ဆရာတော် ဦးရာ ဇိန္ဒ ကို လှူတာ ဆို တော့ အမြတ်ဆုံးနဲ့ အကျိုးအပေးဆုံးမှာ ပါဝင် နေပါတယ်..။
၂။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဆုတောင်းရပါမယ်..။
လှူပြီဆိုတာနဲ့ ဒါနရဲ့ အကျိုးကို မိမိရရပါလို၏ လို့ဆုမတောင်းပဲ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဒါနဲ့ အကျိုး ရပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ညွှတ်ပြီး စေတနာထာပေးတဲ့အခါ စေတနာသည် ကံဖြစ်တဲ့အတွက် စေတနာရဲ့ အကျိုးကို ပါ နှစ်ထပ်ကွမ်း ကုသိုလ်ရရှိနိုင်ပါတယ်..။
အပရ( လှူပြီးချိန်မှာထားရမဲ့စိတ် )တို့ဖြစ်ပါတယ်..။
အလှူလုပ်မယ်လို့ သဒ္ဒါပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ မိမိလှူမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်.။ရွေးပြီးမှ သည် စေတနာ သုံးတန် ကို ရောက်လာ ပါတယ်..။အဲဒီအခါမှာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အကောင်းအဆိုးကို မစိစစ်တော့ပဲ
သာသနာတော်ကိုသာ ရည် ရွယ်ပြီး
၃။ အချက် ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်..။
ဆရာတော် များစွာရဲ့ အဆုံးအမ များကု မှတ်သားထားမိသလိုမျှဝေချင်ပါတယ်..။
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှာပါတယ်..ဒါနသည် အပေါစားတရားမဟုတ်၊မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ကို ဆက်သွယ် ပေးနေတဲ့ဇောင်းတန်းသဖွယ်လို့ မိန့်ကြားဘူးပါတယ်..။
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးက မိန့်ကြားဘူးပါတယ်..ဒါနနောက်က အသိမလိုက်ရင် သံသရာ ရှည်မယ်တဲ့။ဒါန၊သီလ ၊သမထ ဆိုတာ သာသနာ ပမှာလည်းရှိပါတယ်။ဝိပဿနာ သာ မရှိတာပါ.။သာသနာ တွင်းမှာ ဘုရားပွင့်၍ ဉာဏ် ၂ ဉာဏ်ရနိုင်ပါတယ်..။ကမ္မဿကတာ ဉာဏ် နှင့် သစ္စာကို သိသော သစ္စာနုလောမိက ဉာဏ်(ဝါ) ဝိပဿနာဉာဏ် တို့ဖြစ်ပါတယ်..။
ယခုကို ကျော်စိုးတို့ရဲ့ အလှူ ဒါနသည် သစ္စာ သိရန် အခြံအရံတစ်ခုဖြစ်ပါစေကြောင်း၊ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ လည်းယုံကြည်ပါတယ် လို့မှတ်တမ်းပြုရင်းနဲ့သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်..။ သာဓု သာဓု သာဓု
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:07 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၃ နှစ် ခွဲ ခန့်က နှလုံးခွဲထားရတဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ သားကို ယခု ပြန် လည် ပြသ တဲ့ အချိန်မှာ ဆရာဝန် ကနောက် ထပ် အသက် ရှင် နိုင် စွမ်းသည် ၁၀ နှစ်မျှ ပင် မသေချာ ပါတဲ့..။
သည် သတင်းသည် သောက၊တစ် ဖန်ဖြစ်စေရသလို သံဝေဂဉာဏ် လည်း ခိုင် ခန့်လာ ခဲ့ရပါတယ်..။ ဇာတိ၊ဇရာ၊ ဗျာဓိဆိုတဲ့ စခန်းများကို ဖြတ်သန်း ၍ ခရီးလမ်းဆုံးသည် မရဏခံတွင်းသက်ဆင်းကြရမှာပါ။
အိုနာသေသို့မောင်းနှင်ပို့၊ လူတို့ မမြဲပါတကား။
ရသည် ဥစ္စာ ၊ချစ်သူပါ စွန့်ခွာ သွားရမှာ ပါတကား။
ခိုးကိုး ရာ နှင့်၊ တွယ်ရာ မဲ့၊ အားနွဲ့လှပါတကား..။
လိုမပြည့်ဝ၊ အားမရ တဏှာ့ကျွန်ချည်း ပါတကား..။
ကျေးဇူးတော် ရှင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ထောင် ထဲတရားသွားဟောတဲ့ အခါ၊ ထောင် မှူး ကမိတ် ဆက် ပေးတယ် မနက် ဖြန် ကြိုးပေးသတ် ရတော့မဲ့ အကျဉ်းသား နဲ့..။ဆရာတော် ဘုရားကြီးကပြန်ပြောတယ်...။ (အတူတူ ပါပဲဗျာ..ကျုပ်တို့လည်း သေမိန့်ကျပြီး သားပါတဲ့..။) သူတော် ကောင်းကြီးများရဲ့ မှတ်လောက် သားလောက်စကား..ပါ..။
၃၁ဘုံအတွင်း..ခန္ဓာ ရထား သူများသေမိန့် မှ လွတ် ကင်းသူ ဘယ် သူများရှိ နိုင် ပါ မလဲ...။ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရားသခင် က သည် ဥပမာ ကို စကားနဲ့ မပြော ပဲ ကိသာဂေါတမီ ကို မသေဘူးသော အိမ်မှ မုံညှင်းစေ့ ကို ရှာခိုင်း ခဲ့တာမဟုတ်လား။ ကျွန် မသည် လည်း(ကိသာဂေါတမီ )လို ဖြစ်နေခဲ့ ပါသလား..ဖြစ်နေမိပါသလားပြန် ကြည့် ရပါတယ်..။တဏှာ နိရောဓော မဖြစ်သရွေ့တော့..ခန္ဓာနိရောဓောဘယ် ဖြစ်ပါ့မလဲနော်..။
တကယ်တော့ ကျွန်မ သည် ၊ ရင်ဆိုင်ကြ အုံးစို့ ဆိုတဲ့ Post ကို ရေးခဲ့တာ ဟာ တဏှာ့ကျွန် ပီပီ တဏှာ ခိုင်းသလို လုပ် ခဲ့တာ ပါ..။ သည် ဆောင်းပါးကို သားသူငယ် ချင်းလေးတွေဖတ်ကြရင် သားကို ညှာတာ ကြ မယ် စောင့် ရှောက် ကြမယ် ပေါ့လေ...အတွေးကို က သည်လို..။ အယူသမားကြီးတွေကိုး အယူဘက် က စွဲနေပြီလေ..။
ဆေးရုံ အတွေ့ အကြှုံ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ အရပ် ရပ် က ကျွန်မ သူ ငယ်ချင်းများထံ မှလည်း ခွဲ စိတ်မှု အောင် မြင်တဲ့ သတင်းစကား ပေးမှုမျိုး ကို မျှော် လင့်တောင့်တခဲ့တာပါ..။ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အကြံပေးစကားလေးတွေ..၊ကျွန်မအားနားလည် အားပေးမည့် မျှော်လင့်ချက် ရောင် ခြည် သန်းစေမဲ့ စာလေးတစ်ကြောင်းလောက် တော့ဖြင့် စောင့်စားခဲ့ မိတာ အမှန်ပါ..။
ကျွန်မ မရခဲ့ ပါ..။
တကယ်တော့လည်း ကျွန်မ စိတ်ကို ဒုက္ခပေးသူသည် နှလုံးရောဂါ မဟုတ်၊ သားသား မဟုတ် ၊Response မလာသော သူငယ်ချင်းများမဟုတ်ပါ..။
ကျွန်မသား ဟု အမည်ပညတ် ကို အကောင်အထည် အသက်လိပ်ပြာ အဖြစ် အမြင်မှားနေတဲ့ သက္ကာယ ဒိဋ္ဌိ ကြောင့် ပါ..။
ငါ့သားရယ် လို့ အကောင်အထည်ထင်..ပြီးတွယ်ထားတဲ့ သမုဒယကြောင့်ပါ..။သမုဒယ ကြောင့် ဒုက္ခ ဖြစ်တယ်လေ အသေအချာ ပေါ့..။
ဖြစ်ပျက် သမျှ၊ သင်္ခါရ၊ ဒုက္ခ သစ္စာ မှတ်။
ဖြစ်ပျက် မှုတွင် ငါကောင်ထင်၊ခင် မင် သမုဒယမှတ်။
ရုပ် နာမ်အားလုံး၊ဖြစ်ပျက် သုဉ်း၊ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှတ်။
ချုပ်ဆုံးမှုတွင် ဉာဏ်သက်ဝင်၊ သိမြင် မဂ်ဟုမှတ် ။
ဓမ္မရေးရာမှာတော့ အဘိုးတန် မိတ်ဆွေကောင်းများရခဲ့ပါတယ်...အခုလို မီးပြတ်တောက်သွားတဲ့ သစ္စာ အလင်းကို ပြန်ပြီး Charging သွင်းပေးတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဆရာ ဦးဝင်းမြင့်ဇော်(သစ္စာတရား) နှင့် သား(ဓမ္မရသ) ကို အောင်ဦးတို့ ကို ကျေးဇူးစကားဆိုပါရစေ..။
ဤ စကားများသည် ကျွန်မ ရဲ့ ကိလေသာ ရော ဂါ အတွက် အပူငြိမ်းဆေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...ဓမ္မ မိတ်ဆွေများအားမျှဝေရင်းမှတ် တမ်းတင်ပါရစေရှင်..။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျား..မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ နောက်ဆုံးစကားဖြစ်တဲ့...”သင်္ခါရတရားသည် ပျက်တတ်တယ်၊ သတိနဲ့ကြည့်” ဆိုတဲ့စကားက မလုံလောက်ဘူးလားဗျာ..ဒီစကားက လေးအသေင်္ချနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းလုံး၊ ပြီးတော့ ၄၅ ဝါလုံး တရားတွေဟောပြီးမှ အနှစ်ချုပ်ဖွင့်ဟထွက်လာတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တကယ့်နောက်ဆုံး ပြောတဲ့စကားပါ...တကယ့် အနှစ်ကလေး၊ တကယ့်အရသာကလေး တကယ့်အရေးကြီးဆုံးလေးကို ဉာဏ်တော်နှင့်ရွေးချယ်သီကုံးပြီးတော့ ပန်းလေးတစ်ကုံးကဲ့သို့ ပေးသွားတာပါ...ဒီပန်းကုံးသည် ပန်သူတိုင်းကို တင့်တယ်ပါတယ်...ဤသို့ နောက်ဆုံးပြောတဲ့ ဒီစကားကို ကောင်းစွာနာယူခံယူ၍ အစဉ်မပြတ် တဖျတ်ဖျတ် ပြနေတဲ့ သင်္ခါရကို သတိမလတ် ပညာနဲ့ကြည့်တတ်ရင်ဖြင့် အချိန်မလင့်ပါ လိုရာခရီး ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဆီကို ရောက်မှာ အမှန်သာဖြစ်ပါတယ်နော...လေးစားစွာဖြင့်ဝင်းမြင့်
aung oo said... အန်တီရေ..ခန္ဓာရထားတဲ့ သား တို့တွေသည် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတွေကို မလွဲရှောင်သာပဲ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရမှာပါ။ ဒီခန္ဓာကို ကျန်းမာအောင်၊ ရပ်တည်နိုင်အောင်၊ နေထိုင်နိုင်အောင် ပြုပြင် စီရင်ပေးနေရသလို တန်အောင်လည်း ခိုင်းသင့်တယ်လို့ သတိရလိုက်မိတယ်။ လိုချင်တဲ့ သံသရာ တဖက်ကမ်းကို ကူးတဲ့ နေရာမှာ ဖောင်သဖွယ် အသုံးချရာမှာပဲလို့ ထင်မိပါတယ်။ မိခင်မေတ္တာကို ထင်မြင်စေပါတယ် အန်တီ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ...။
ဓမ္မ မိတ်ဆွေများ အား လေးစားစွာကျေးဇူးတင်လျက်...
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:03 AM2မှတ်ချက်ရေးရန်
အရာရာ ဟာ ဖြစ်သင့်လို့ဖြစ်တာချည်းပဲ.. မဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်နေတာ တစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ သားရေ..။ တစ် ခါက သောတာပန်ရဟန်းတစ်ပါး ဟာ.. နံနက် မိုးလင်း ရေကန်နားမှာ မျက်နှာ သစ်နေတုံး သူခိုးတစ် ယောက်က ခိုးရာပါပစ္စည်း ကို နံဘေးနားချပြီး ထွက်ပြေးသတဲ့..။
နောက် က ဖမ်းဘို့ရောက်လာတဲ့ မင်းချင်းတွေက ပစ္စည်း ထုပ် နဲ့ လက်ပူးလက်ကြပ်မိတယ်ဆိုပြီး...ဝိုင်းရိုက်ကြတာ..သေပါလေရော..။ ဒါကိုမကျေနပ် တဲ့ သံ ဃာ တချို.က ဘုရားထံ သွားလျှောက်ကြတယ်..။မတရားဘူး..မတရားသဖြင့် ခံရတယ်ပေါ့..။
မြတ်စွာဘုရားက ပြန်ပြီးအတိတ် ကိုဆောင်ပြတယ်..။ ယခုဘ၀မတိုင်ခင် ဘ၀တစ်ခုမှာ..လှည်းသားတွေကို အုပ်ချုပ်တဲ့ သူဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့..။စခန်းချတဲ့ နေရာ တစ်ခုမှာ တစ်နေ့တော့..ခိုးပြေးလာတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲ ရောက်လာပြီး..ခိုကိုးခွင့်တောင်းကြတယ်..။
လှည်းသူကြီးက မကြံကောင်း မစည်ရာ..၊ မိန်းကလေးကို တပ်မက်တော့...မတရားသဖြင့်လိုချင်လာရော..။ညတွင်းချင်း အဘိုးတန်ပစ္စည်း သူတို့ လှည်းမှာ သွား ဖွ က်ထားပြီး..သူခိုးရယ်လို့ စွပ်စွဲ ရိုက်နှက်..သတ်ပစ်ပြီး မိန်းကလေးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်..။ အဲဒီအကြောင်းကံရဲ့ အကျိူးဆက်တွေ.. လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဆောင်ပြတော်မူခဲ့တယ်..။
ကံ ကံ၏ အကျိူးပေးကို နားလည်တဲ့ ကမ္မဿ ကတာ သမ္မာဒိဌိ ဉာဏ် ရရှိ ခဲ့ပြီဆိုရင်..တစ်လောကလုံး အမြင်တွေ ရှင်းကုန်တယ်..။ အပြစ်တင်စရာ..မရှိတော့ဘူးပေါ့..။ အကျိုးပေါ်လာရင် အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ဘို့ ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားခဲ့ ပါတယ် ကလေးရယ်..။ မေမေတို့လည်း အတိတ်မှာ မှားခဲ့တာ တွေရှိမယ် သားရေ..။ ခံစား စံစား ရတာတွေ မှန် သမျှ ၀ဋ်ကြွေးကျေအောင် ဆပ်ဘို့အခွင့် အရေးပေးတာလို့ မှတ်ယူပါတယ်။ ကျေအောင် ဆပ်ကြတာပေါ့..သားသားရေ..။
သားသား နှလုံးခွဲရမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို လက်ခံရရှိ ချိန် မှာ မေမေ ဟာ..သာသနာ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စင်္ကပူ ဓာတ်တော်တိုက် မှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်..။ တစ် ခြားနေရာမှာ ဆို..မွှေနှောက်ချောက်ခြား လွင့်ပါး ပျောက် ကွယ် သွားမတတ် ခံစားခဲ့ရမှာပါပဲ..။
ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေ..ပူပင်သောကတွေ..၊ ငါ့သားမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ ဒေါသတွေ၊.ဝေဖန်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း မဲ့ခြင်း ဆိုတဲ့ မောဟတွေပြည့်လျှမ်းခဲ့ရပါတယ်..။
သားသားနှလုံးမခွဲခင် မေမေ့နှလုံးသည်းပွတ် ကို အရင် ခွဲထုတ် ယူငင်သွားခဲ့သလိုပါ သားရေ..။ (ရင်အုပ်မကွာ) ဆိုတဲ့ မိခင်ရဲ့အရည်အသွေး မပြည့်မီလေသော..မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့သား။
ဆိုတဲ့ ဒေသနာတော် ကို မေမေတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ကဇေတဝန်ကျောင်းမှာ ကုမာရကဿပ မယ်တော် ကို ဆုံးမရင်းဟောကြားခဲ့ တာကိုမေမေပြန်သတိရမိပါ တယ်သား ရေ။ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္မာန်ကို ကြိုးစား ဘို့ ဘိက္ခူနီမ ဝတ်ခဲ့ပေမဲ့ လူ့ဘဝက ပါလာ တဲ့ သန္ဓေ သားလေးကို မွေးပြီးကတည်းက တရားမေ့ပြီး မျက်ရည် ပင်လယ် ဝေခဲ့ရ တဲ့ အမေ တစ်ယောက် ပေါ့..။
ရဟန်းဝတ်သွားတဲ့ သားကိုတမ်းတတဲ့မျက်ရည် ၁၂ နှစ် တာ ပတ် လုံး ပူလောင် လိုက်တာ.. မေမေ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားလို့ရပါတယ် သားရေ..။မျက်ရည် အလူးလူး နဲ့ အရူးမီးဝိုင်း သား- သား- သား ဆိုပြီးအော် ဟစ် လဲကျ ခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ အမေ တစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို လည်း ရာနှုန်းပြည့် ခံစား နား လည်ပါ တယ် သား ရယ်။
( သင်သည် ချစ်ခြင်းကို ဖြတ်တောက် ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ပါသလော) လို့အေးစက်ပြတ်တောက်တဲ့ စကားကို သားရဟန်းက ဆိုတဲ့ အခါ..အဲဒီနေ့မှာပဲ အရဟတ္တဖိုလ် တည် ခဲ့တာ ကို မေမေ ကောင်းကောင်း အမှတ်ရ တာ ပေါ့ သားရယ်..။
by rheumatic fever. The heart valve is damaged byadisease process that generally begins
withastrep throat caused by streptococcus A bacteria that may eventually cause rheumatic
ပိတ်ဆို့တာပေါ့..သာမာန်လူတွေ ၅စင်တီ ရှိတယ်..သားသားမှာ က ၁ စင်တီသာ ကျန်တော့လို့ ခွဲ ပြီးချဲ့ရတာ
ပါသား..။သူက အစားအသောက်တွေကတော့ မကူးစက်နိုင်ဘူး..။ သွားပွတ်တံ၊ ခေါင်းအုံးစွပ်
၊အမြဲတမ်းသုံးတဲ့အသုံးအဆောင်တွေကတဆင့် ကူ စက်စေနိုင်တယ်..။
Strep throat is caused by Group A streptococcal infection (GAS), specifically the bacterium
Streptococcus pyogenes It is spread by direct, close contact with an infected person via air-based germs.In addition, it may be spread through contamination of pillow cases, toys, toothbrushes and other often-used materials. Rarely, contaminated food, especially milk and milk products, can result in outbreaks.
ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ကော်ဖီ ၊ လဘက်ရည် လုံဝမသောက်ပါနဲ့..။စာမှာက (Tobacco product)အကုန်ရှောင်ရမယ်။ကွမ်းစားတာ လည်း ပါပါတယ် ကလေးရေ..။
ရွှေတိဂုံ ဘုရားတက် ဘို့ အကြံပေးချင်တယ် သား..။
မေမေက သည်မှာ စုံစမ်းတော့ အဆို့ရှင်ကို အစားထိုး ခွဲစိတ်နိုင်တယ်တဲ့.. ။
မေမေ့ရဲ. မိခင်ဘ၀တာဝန်ကျေပြွန်မှု တစ်ခုဖြစ်စေရပါမယ် သားရယ်..။သည်တစ်ခါတော့....
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:07 PM4မှတ်ချက်ရေးရန်
မေမေ လည်း အတိတ် ကို ပြန်လည်မြင်ယောင်၊ကြားယောင်ရင်း သင်ယူခဲ့ရဘူးတဲ့ လင်္ကာလေးတွေ သတိရခဲ့ပါတယ် ကလေးရေ..။ မင်္ဂလာဗျူဟာ သင်တန်းကျောင်းကသင်ပေးခဲ့တာ ပါကွယ်..။
မေမေ ပြောဆို ဆုံးမတဲ့ အခါ အမည် နာ မ ဖေါ်ပြကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ ကျေးဇူးတော် ရှင်..ဆရာတော် ဘုရားကြီး များရဲ့ အမည်ကို ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ လည်းတရားပိုင် ရှင် အစစ် အမှန် ကတော့ မေမေ တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်..။
သစ္စာလေးပါး၊မြတ်တရားကို ၊ဆရာ မကူ သယမ္ဘူဉာဏ်တော်ဖြင့် ကိုယ် တော် တိုင် သိခဲ့ တာ ပါ.။တရားပိုင်ရှင် အစစ် သည် ကျေးဇူး တော် ရှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဖြစ်တာ ကို အမြဲသိမှတ် ပူဇော် နေရမယ် နော်..။
ကုသိုလ်ရေး တွေ လုပ်ဆောင်နေကြပေမဲ့ တစ် ခါ တစ်ခါ၊ ဆရာစွဲ၊ဒကာစွဲ ဂိုဏ်းဂဏ အစွဲ တွေ ဝင်လာ ပြီး တရားပိုင်ရှင် အစစ် မြတ်ဘုရား ကို မေ့လျော့တတ်တဲ့သဘောလေးတွေ မသိမသာ ဖြစ်တတ်တာ ကို ဆင်ခြင်ကြရပါမယ် ကလေးတို့ရေ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဝေဘူ ဆရာတော် ဘုရားကြီးဆိုရင် သင်ပြခဲ့တဲ့ တရားရှုမှတ်နည်း ကို ဝေဘူနည်းရယ် လို့ အမည် တံဆိပ် မတပ်ဘို့ တပည့် သားမြေးများကို ကြိုတင် မှာကြားခဲ့ပါတယ် ကွယ်..။ ငါ့ကြောင့် ဝေဘူနည်း ဆိုတာ ထွက်မလာ စေရကြောင်းထပ်လောင်းမှာကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတော် ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးကလည်း တရားစခန်းပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာ မေမေတို့ကို သေချာ မှာ လိုက်ပါတယ်။
ဘာနည်းနဲ့ အားထုတ် ပါလည်းလို့မေးတဲ့အခါ.. (မြတ်စွာဘုရားသခင် သည် သောတာပန် တည် ပြီးဖြစ် တဲ့ပဉ္စဝဂ္ဂီ ငါးပါးကို ရဟန္တာ ဖြစ်အောင်ဟောာကြားခဲ့ တဲ့ အနတ္တလက္ခဏ သုတ္တန် နည်းဖြင့် ရှုမှတ်ပါတယ်လို့ဖြေရမယ်) ဆိုတာသေသေချာ ချာ မှာထားပါတယ်..(ပိုင်းလော့ဆရာတော် နည်း၊ မိုးညှင်းးသိင်္ဂီကျောင်းနည်း )ပါလို့မဖြေ ရဘူးဆိုတာ မှာကြားတားမြစ် ထားပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
မေမေ ငယ် ငယ် က မင်္ဂလာဗျူဟာ အသင်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဥာဏ်တော် ကို ပုဇော်တဲ့ကဗျာလေး တွေကို ကလေးတို့ကို ပြန် သင်ပေးပါရစေကွယ်..။ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ကို အတူ တကွပူဇော်ကြရအောင်နော်..။
ဘုရားရှင်တော်၊ မပွင့်ပေါ်လျင်၊ လူတော် အများစိတ်ကောင်းထားလည်း၊
ဤကားသုသိုလ်၊ အကုသိုလ် ဟု၊ ထို ထိုဘုံဘဝ မသိရ၊ များလှ အပြစ်တွေ..။
ဘုရားရှင်တော် ၊ပွင့်ထွန်းပေါ်၍၊ ဟော ဖေါ်ညွှန်ကြား၊ မြတ်တရားကြောင့်
ဤကားကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် နှင့် ၊ထို ထို ဘုံဘဝ သိကြရ၊ များလှ ကျေးဇူးပေ..။
ကျေးဇူးတော် ရှင်၊ ဘုရားရှင် ကို၊ဦးတင် မပြတ်၊ကျေးဇူးဆပ်ဘို့
အမြတ်ရတနာ၊ သာသနာ၏ နိုင်ရာဝန်ထမ်း၊ကိုယ် စီစွမ်း၊ကြိုးပမ်းကြပါစို့..။
သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် ကြီးကို ကြည် ညိုတတ်အောင် သည် ကဗျာလေးကိုလည်း အတူရွတ် ဆို ပူဇော်ကြရအောင် ကလေးတို့ရေ..။
သိစရာမှန်က၊ မကျန်ရအောင် ၊လုံးဝစုံလင်၊ အကုန်မြင်၊ သဗ္ဗဉ် ဉာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။
သိသည့်တရား၊များအပြားနှင့်၊ဟောထားစဖွယ်၊နည်းအသွယ် သွယ် ကို။ချယ်လှယ်စုံလင်၊ အကုန်မြင် သဗ္ဗဉ် ဉာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။
ကျွတ်ထိုက်ကြပေ၊ များဝေနေ၏ ဣနြေ္ဒ စရိုက်၊ သူ့အကြိုက် ကို ၊နှိုက်ချွတ်စုံလင် အကုန်မြင်၊ သဗ္ဗဉ် ဉာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။
သဗ္ဗဉ် ဉာဏ်အား၊စွမ်းသုံးပါးကို ၊အများဝေနေ ကျွတ်လွတ်စေဘို့၊မနေမနား၊
သက်တော် အားဖြင့် ကြီးမားလေဘိ၊ ရှစ်ဆယ်ပြည့်၍ ၊
ပရိနိဗ္ဗာန်၊ စံသည့်တိုင်အောင်၊ သယ်ယူဆောင်၊ ဘုန်းခေါင်ငါတို့ဘုရားတည်း။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:00 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သား သား နဲ့ မီး မီး တို့ရေ..။
လွန် ခဲ့ တဲ့ အနှစ် သုံးဆယ် ကျော် လောက် တုံးက မေမေတက် ရောက်သင် ယူခဲ့ရတဲ့ ဓမ္မ စာပေ သင်တန်းကျောင်းလေးအကြောင်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျေးဇူးစကားတွေ ၊ကျေးဇူး တရား တွေ အကြောင်း ပြောနေဖြစ်တာ မို့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာလက် ဦးဆရာ များကို ကို အမှတ် တရ မှတ်တမ်းတင်ရင်း၊ ဦးခိုက် ပူဇော်ချင်လာ တာ နဲ့သည် စာ လေးကို ရေးလိုက်ပါတယ် ကွယ်..။
အရင် တစ် ခါ ရေးတဲ့ စာထဲမှာလည်းပါ တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ ထီးတော် ရိပ်က ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်း ၊မင်္ဂလာ ဗျူဟာ အသင်းချုပ် ဖြစ်ပါတယ်..။ အခုကြားတောရလမ်းမှာ ရှိတဲ့ ဓမ္မဗျူဟာ သင်တန်းကျောင်း မှ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘွဲ့ ရထားတဲ့ ဆရာ မဒေါ်ခင်လှတင် ရဲ့ ဖခင်ကြီး (ဓမ္မ ဗျူဟာ ဦးမြသောင်း၊ နဲ့ ဆရာမ ဒေါ် သူဇာ မြင့်) တို့ကို သည် စာရေးသားရင်း ဦးခိုက် ပူဇော်လိုက်ပါတယ် ကလေးရေ..။
ဝါတွင်း သုံးလ ရဲ့ အပတ် စဉ် တနင်္ဂနွေ နေ့ တွေ တိုင်းမှာ တက်ရတာပါကလေးရေ..။သင်တန်း ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန် မြို့ က ဘုရားစုံလည်းလည် ဖူးရသေးတယ်..။သင်တန်းရဲ့ သင် ရိုး ညွှန်းတန်း အရ ဗုဒ္ဓဝင် နဲ့ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော် တွေကို လင်္ကာ လေးတွေနဲ့ သင်ကြားပေးခဲ့တာ ပါ..။
(မကြားဘူးကြား ၊ကြားဘူးစင်ကြယ်၊ ယုံမှား ပယ်ဖျောက်) ဆိုတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလေးတွေ လက်ဆောင်ရခဲ့ဘူးပါတယ်ကွယ်..။
ငယ်ငယ်က မုန့်ဘိုးလေးတွေထဲကနေ ဓမ္မဗျူဟာ စာစောင်၊ မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင် လေး တွေကို တန် ဘိုးထားဖတ်ရှု ကြီးပြင်းလာ နိုင် ခဲ့တာ သင်တန်းကျောင်းလေးက ချပေးခဲ့တဲ့ မျိုးစေ့ ကြောင့်ပါပဲကွယ်..။သားသား မှတ် မိ မှာ ပါ မေမေ ဟာ သည် စာ စောင်လေးတွေကို စုဆောင်းထားရှိ ပြီး ဘုရားကျောင်းဆောင် အောက် နားမှစင်လေး တစ်ခုနဲ့ သီးသန့် ပူဇော် ရင်း ၊ ဖတ် ရှု ခဲ့ရင်း တစ် ခါ တစ် ခါ ကျ ဆင်းတတ် တဲ့ စိတ် ဓါတ်တွေ အတွက် အားမာန် သစ် တွေ ဖြစ်စေခဲ့ရတာပါ။
မေမေ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲတွေဖြေတော့လည်း မင်္ဂလာ ဗျူဟာ အသင်းက နေ့လည် စာ ကျွေးတာ စားပြီး ဖြေခဲ့ရပါတယ်..။အောင် ရုံ ပဲ ဖြေနိုင်ခဲ့တာတောင် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွေနဲ့ ဆုချပေးခဲ့ပါသေးတယ်..။သားသားတို့ မီးမီးတို့လည်း အချိန်ပေး ပြီး သွားရောက် သင်ယူ နိုင်ဘို့ကြိုးစားကြပါကလေးတို့ရေ...။ ကလေးများအတွက် နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကွယ်..။
မင်္ဂလာဗျူဟာ အသင်းချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး၊ မဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဦးအောင် သိမ်း ရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖော်ပြရင်း ကျေးဇူးတုန့်ဆပ်၊ ပူဇော်လိုက်ပါတယ် ကွယ်၊ ဖတ် ဖြစ်အောင် ဖတ်၊ မှတ် ဖြစ်အောင် မှတ် ၍ ကျင့်ဖြစ်အောင် ကျင့် ကြပါစို့ကလေးရေ..။
ရေချမ်းသစ်သီး၊ ပန်းဆီမီး ကို ၊
ခိုင် ဖြီးသဒ္ဓါ၊ လှူပြီးကာ မျှ
ငါ့မှာ ကောင်းကျိုး ၊အလွန် တိုး ဟု၊
ပျော်မွေ့မြတ်နိုး၊ မြဲရှစ်ခိုး၍ ၊
ကောင်းကျိုးပွားစည်၊ ကြီးလှပြီ ဟု
ဓာရဏ နှင့်၊ ဓမ္မစင်္ကြာ
မေတ္တာ ပဋ္ဌာန်း၊ ရွတ် နိုင်စွမ်းကြောင့်
ကြီးမည့် တေဇော်၊ မစောင့်မျှော်နှင့်..။
ဂုဏ်တော် ပုတီး၊ သက်စေ့ပြီးအောင်
ဇွဲကြီးခိုင်မာ၊ ငြိမ်သက် စွာ ဖြင့်
လုံလောက်လှပြီ၊ မရပ်တည် နှင့်..။
ရှိခိုးဝတ်ရွတ်၊ စေလွှတ် မေတ္တာ၊
မညည်းဆင့်ကဲ၊ စိတ်မြဲစိတ်ပါ ၊ မဖြတ်ပါနှင့်..။
အကျိုး နိဗ္မာန်၊ မျှော်ရိုးမှန်က၊
သံသရာဝဋ်၊ ထွက် လွတ်စေကြောင်း၊ လမ်းမှန်ကောင်းဟု
ညွတ်ပြောင်းစိတ်ထဲ၊ ယုံကြည် စွဲလျက်
ခိုင်မာ ဆန္ဒ၊ ကြိုးလုံ့လမှ၊
ဆရာဓမ္မဗျူဟာဦးမြသောင်းနှင့်၊ မင်္ဂလာ ဗျူဟာ အသင်းကြီးအားဦးနှိမ်ရိုကျိုးရှစ်ခိုးပူဇော်ကန်တော့လျက်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 1:33 AM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
သားသား နဲ့ မီးမီးရေ..
မေမေ ပြော ဆို နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊ ပြစ်မှားကံတွေ အကြောင်း ။ သူတစ်ပါး အပေါ် အပြစ်တင် စိတ် မမွေး ဘို့အကြောင်း တွေ ရယ် အခုနောက် ဆုံးပြော ခဲ့ တာ က အတင်းမပြော နဲ့ ဆို တာရယ် ထိရောက်ခဲ့ ပါပြီနော်။
ပြစ်မှားတယ်၊ကဲ့ရဲ့တယ်၊ ဝေဖန်တယ်၊ အတင်းပြောတယ် ဆိုတာ တွေဟာ စကားလုံးတွေ အမျိုး မျိုး တပ်ပေမဲ့ တကယ့် သဘောတရားကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့ ပျော့ ကွက်၊ အားနည်း ချက် ကို ကိုယ် က အမြင့် သူ့ကို အနိမ့်ထားပြီး ဖော်ပြတာ၊ တွေးတောတာ ၊ စိတ်ကူးတာ၊ပြောဆိုတာ ကို ခေါ်ပါတယ် ကလေးရေ..။
(နိဗ္ဗာန်လိုချင် သူများအတင်းမပြောနဲ့။ ချမ်းသာလိုချင် သူများအတင်းမပြော နဲ့ )ဆို တဲ့ ဆုံးမ စကားဟာ ကျေးဇူးတော် ရှင် ထွဋ်ခေါင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်မှာခဲ့တဲ့ စကားပါ ကလေးတို့ရေ..။
မေမေတို့ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ် စွာ ဘုရား က ရာဟုလော ဝါဒသုတ္တန် မှာ ဟောကြားခဲ့တာပါမြန်မာ လို ပြောရရင် (သူတစ်ပါးရဲ့ မကောင်းကြောင်းကဲ့ ရဲ့ ရှုတ် ချ စကားကို ရှေ့ မှာ လည်း မပြောရဘူး ၊နောက် ကွယ် မှာ လည်း မပြောရဘူးတဲ့..။)ဆုံးမ မယ် ဆိုတဲ့စိတ် နဲ့ ပြောဆို မယ် ဆိုရင် လည်း စဉ်းစား ပြီး ကုသိုလ် လား ၊ အကုသိုလ် လား ဆိုတာ ချိန်ဆပြီး ပြောရမယ် တဲ့..။
ကိုယ် ပြောတဲ့ စကား ဟာ အပူဓာတ် အရှိန် နဲ့ပြောတာလား၊ အအေးဓာတ်နဲ့လားဆိုတာ ခွဲခြားနေရမယ်။ဥပမာ ပေးရရင် သံလိုက် အိမ် မြှောင်လိုပဲနော် ။ အပူဓာတ် ဆို (အစုန်လမ်း၊) အအေးဓာတ် ဆိုရင်( အဆန်လမ်း )ဖြစ်ပါတယ်..။
မေမေ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ကျောင်းမှာ တရားစခန်းဝင် တဲ့ အခါ လမ်း သုံးလမ်း ကို ဆရာတော် ဘုရားက သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
၃။ နိဗ္ဗာန်လမ်း ဆို ပြီး ရှိပါ တယ် ကလေးတု့ရေ..။
အကုသိုလ် ဓာတ်များရင် အစုန်လမ်း ( အပါယ် လေးဘုံကိုစုန်ဆင်းရပါလ်ိမ့်မယ်၊)
ကုသိုလ် ဓာတ်များရင်တော့ အဆန်လမ်း (လူ့ဘုံ၊ နတ် ပြည် ၆ထပ်၊ ဗြဟ္မာ ၂၀ဆို တဲ့ သုဂတိ ဘုံ ကို ဆန် ပါလိမ့်မယ်။)
နိဗ္ဗာန် လမ်း ကတော့ သုဂတိ ဘုံမှာ စံစားရမဲ့ ဒုက္ခ သစ္စာ၊ ဒုဂ္ဂတိ ဘုံမှာ ခံ စားရ မဲ့ ဒုက္ခ သစ္စာ ဤ ဒုက္ခ သစ္စာ တရား၂ပါး တို့ကို မခံစား ရစေတဲ့ လွတ် မြောက် နေတဲ့ ဝိမုတ္တိ သုခ ၊ အငြိမ်း ဓာတ် နိဗ္ဗန် ချမ်းသာ ရ မဲ့ ဝိပဿနာ တရားတို့ကို သင်ကြားပေးခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကလေးတို့ကို မေမေ က အစုန်လမ်း ဖြစ် တဲ့ သံသရာ့ ချောက် ထဲ မကျရအောင် အရင် သင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေးရေ..။
တကယ်ကျင့်အားသန် တဲ့ ရဟန်း တွေ ၊ပုဂ္ဂိုလ် တွေဟာ အမြင် တစ်ချက်၊ အကြည့်တစ်ကွက် နဲ့ ဝေဖန် ဆုံးဖြတ်ရ ခက် လှပါ တယ် ကွယ် ။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကို ပေါ်လာတဲ့ အာ ရုံ၊ ခန္ဓာ ငါးပါးတို့ကို လျင် မြန် သော ဉာဏ် ဖြင့် တဏှာ အစပ် ကို ဖြတ် နိုင် တတ်ကြတာ ကို မေ့ မထားပါနဲ့ ကလေးရေ။
ကလေးတို့ ပြစ်မှားမိမှာ စိုးလို့ပါကွယ်..။ အထင် သေးစကားဆိုမိကြရင် ကလေးတို့ ကျင့်ကြံ အားထုတ် ဆဲ တရား ဟာ မတိုးတက် တော့တဲ့ အပြင် အစုန်လမ်းကို ဆင်းစေနိုင် လို့ပါပဲ..။
မေမေ ကျေးဇူးတော်ရှင် အရှင် ဆန္ဒာဓိက ဟော ကြားတဲ့ တရားတစ် ပုဒ် ထဲ မှာ ဆရာတော် ဘုရား ပြန် ပြော ပြတာ မှတ် ထားဘူးတယ်။ ဆရာတော် ဘုရားတို့ ကားနဲ့ ခရီးထွက် ရင်းကားထဲက ကက် ဆက် နဲ့ တရားတော်တွေနာ ယူကြပါတယ်။ အဲ ဒီ တုံးကတရားနာ ယူခဲ့ တဲ့တရားတော် ဟာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဓမ္မ ဒူတအရှင် ဆေကိန္ဒ ဆရာတော် ဘုရားရဲ့ တရား ဖွင့်ထားတာ ပါ..။
အဲဒီတရားတော် ထဲမှာ..။ ( ဘုန်းကြီးတို့က ပုထုဇဉ်ပဲ ရှိသေးတယ် )ဆိုတဲ့စကားလုံးပါသွားတာ ပေါ့လေ..။ဒါကို ကြားလိုက် တဲ့ကားပေါ်မှာ အတူစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ် ဦးက ချက်ချင်းဝေဖန် ပြစ်မှား လိုက် တယ်..( ဟင် သည် လောက် ပညာ တွေသင် တရားတွေ ဟော နေပြီးပုထု ဇဉ် ပဲ ရှိသေးတာလား)ပေါ့လေ..။
ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာ ဓိက က ဒကာ ကြီး သည် လို မဆိုနဲ့..အကြောင်း အပြည့် အစုံ မသိပဲ လျှပ် တပြက် မစွပ် စွဲသင့် ကြောင်းပြော ဆို ဆုံးမ ပါတယ်၊ နောင် တော် ကြီး ဓမ္မ ဒူတ သည် စကားကို ဆို တာ ဘုရားဆုပန် ထားလို့လည်း ဖြစ် နိုင် ပါတယ်တဲ့။ကိုယ်မှမသိနိုင်တာ အကုသိုလ် မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ ပြော ဆိုခဲ့ရပါတယ် တဲ့ကလေးရေ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးက လူ တစ်ယောက် ကို ဝေ ဖန်တော့ မယ် ဆိုရင်
ကာလကြာရှည်စွာ အတူနေထိုင်ဘူးရမယ်၊ နောက် ပြီး ထို သူအကြောင်း။စိတ် ဓာတ် နဲ့ လုပ်ရပ်ကို ထဲထဲဝင် ဝင် စိတ် ဝင် စား မှု ရှိေ နရမယ်၊ ပြီးတော့ ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ အရည် အသွေးကိုယ့် မှာ ရှိ နေ မှသာ ပြောပါ လို့ ဆုံးမ တော် မူပါတယ် ကလေးရေ..။
အပြု သဘော နဲ့ ပြော ရင် တောင် သမ္ပဇဉ် တရားလေးပါးနဲ့ ကိုက် ညီမှသာ ပြောဆို ပါလို့ မှာ ကြားပါတယ်။ သမ္ပဇဉ် တရားလေးပါးကို တော့ နောက် တစ်ပုဒ် ထပ်ရေးပါမယ် ကွယ်..။၊ ပြစ် မှား ကံ တွေ ဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက် အောင် အစုန်လမ်းကို ပို့ ပေးစေတတ်လို့ပါကလေးတို့ရေ.။
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဝေနေယျ တွေ အကုသိုလ် မဖြစ်ကြရလေအောင် အတိ အလင်းပဲ ၊ ဆရာတော် ဘုရားရေးသားတဲ့ စာအုပ် နောက် ဖုံးမှာ..( ကျွန်ပ်သည် ဘုရားဆုပန်ထားသော သာ မာန် ရဟန်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်) လို့ေ ဖါ် ပြထားပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
ကလေးတို့ရေ.. အတင်းစကားတွေရှေုာင် ကျဉ် ပြီးအလင်းစကားများသာ ပြောဆိုကြပါစို့ရဲ့..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:52 PM3မှတ်ချက်ရေးရန်
နိဗ္ဗာန်လို ချင်သူများ အတင်းမပြောနဲ့၊ ချမ်းသာလိုချင်သူများ အတင်းမပြောနဲ့
သားသား နဲ့ မီး မီး ရေ.....
မေမေတို့ကလေးတို့ နေ့တဓူ ဝပြောဆိုနေကြတဲ့ စကားတွေကို မပြော မီရယ် ပြော ပြီးရယ် ပြန် စစ်ဆေးကြည့်ပါလားကွယ်..။သူများအတင်းတွေကို မပြောမိဘို့ ကျင့်စဉ် လေး တစ် ခု ကျင့် ကြည့်ရအောင် ကလေးတို့ရေ..။
သူတစ်ပါးကို နှိမ့်ချ ကိုယ့်ကို ကို မြှင့်တင် ပြီး မှ စကားပြောတတ် တဲ့သူတွေကော တွေ့ ကြုံဘူး ပါသလား၊ နောက်ြ့ပီး ချိုချိုသာ သာ အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ပြောဆို ဆက် ဆံ တတ် တဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ် နော်..။ အဲလို တွေ့ တဲ့ အခါ မေမေ ပြော ခဲ့ဘူးတဲ့ အပူဓာတ်လားအအေးဓာတ်လားဆိုတာကိုကလေးတို့ ခံစားရတယ် နော်။ နာကျင်တယ် ၊ပျော် ရွှင်တယ်ဆိုတာ သိသွားတယ် နော်၊ ပထမလူ က အပူ ပဲ၊ ဒုတိ ယလူ က အအေးပဲ။
မေမေ ဟာ ဘယ် ဘဝက ဘယ် လို အကျိုးပေးလည်းမသိပါဘူး၊ အဆောင် ကျောင်းသူ ဘဝကို ကာလ ရှည် ကြာစွာ နေထိုင် ခဲ့ရတယ်၊ အဆောင်သူ တွေ ရဲ့ ညဉ့်နက်နက် လဘက်ဝိုင်းတွေ ဟာ( အလင်းစကား )မဟုတ် ပဲ (အတင်းစကား) တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ ဒီတုံးကတော့ အကုသိုလ် မှန်းမသိ ပဲ ကူးခတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ တစ်ခါ တစ်ခါ အာရုဏ် တက် သည် အထိ တောင် နေလို က်သေးတယ်။ AIT တက်သည် ထိ အတင်းစကားကို အင်္ဂလိပ် လိုတောင် တိုးတက် ပြောဆို ခဲ့သေးတယ်..။
၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလ ၊ စင်္ကပူ သွားရင်း အတိတ်ကံ လေးအကျိုးပေးလို့ ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားနဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ တော့ မှ အဲ ဒီ (အတင်းစကား)အလုပ် ဟာ ကိုယ့် စားမဲ့ အဆိပ် ကို ကိုယ် က ဖော်မျူလာ ထုတ် ပြီး ၊ကိုယ် တိုင် ထုတ် လုပ် ပြီး ပျော် ရွှင် စွာဝါးစား၊ မြိုချခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ဆို တာထိတ်လန့်စွာသိရှိ နားလည် သွားပါတယ်..။
မေမေက (အတင်းစကား)မပြောရဘူး လို့ သင် တဲ့ အခါ ..သားတို့ ကထင်မယ် အတင်းပြောခံရတဲ့ လူဘက် က ကာ ကွယ် ပြောဆိုတာ လို့ တလွဲ တွေး ထင် ကြလေ မယ်..။ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာထည့်တွက်တတ်ခဲ့ရင် ပါတော့ ပါပါတယ် ၊ ဒါပေ မဲ့ လိုက်နာ ချင်စိတ် ပေါ်အောင်ကတော့ အပိုင်းခွဲ ပြီး သုံးသပ်တတ် ရမယ် ကလေးတို့ရေ..။
ကိုယ်နဲ့ ဆိုင် တဲ့ ကိုယ့် အပိုင်း မှာ အကုသိုလ် မဖြစ်စေရေး ဟာ ကိုယ့်အရေး ဖြစ်နေ ပါတယ် ကလေးရေ..။ စိတ် ရဲသဘော တရား၊ စိတ် ရဲ့ အလှည့်ကလေး ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကို မေမေ တို့ မသိခဲ့လို့ပါ..။
ဆရာတော် သုံးတဲ့ အသုံး အနှုံးလေးတွေက၊ ဥပမာလေးတွေကို ပြော ပြ မယ်..။ အာ ရုံ တွေကို စိတ် ကဖမ်းယူ ကျက် စားတဲ့ အခါ တိတ်ခွေဖမ်း သလိုပါပဲ တဲ့၊ ဆဲသံ ဆို သံ၊ မနာလိုသံ ၊ကဲ့ရဲ့ သံတွေ သွင်းထားမိ တော့ ပြန် ဖွင့်ရင် ဒါတွေပဲပြန်ထွက်မယ်လေ၊ တရားသံဘယ် ထွက် နိုင် ပါတော့ မလဲ..။ကံသတ္တိ သည် သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ အတူ အသွေးအသား မှသည် အရိုး ချဉ် ဆီထိ သတ္တိ ကိန်းသွားပါတော့တယ်။
ရဟန္တာ ကိုယ်တော် မြတ်ကြီးများ ဓာတ်တော်ကျတယ် ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ ၊စင်ကြယ်တဲ့ သတ္တိကိန်း တာကြာတော့ ဓာတ်တော် တွေ ဖြစ်ကုန်တာ သည် သဘော ပါပဲ ကလေးတို့ရေ..။
နောက် ဥပမာ တစ် ခု က စိတ် အစာ စား သလို ပဲ၊ အစာအိမ် မှာ မတည့်တာ ကို စား မိ ရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊Food Poison ဖြစ်တတ် တယ် အစာ အဆိပ်သင့်တယ်ခေါ်တာ ပေါ့၊ မေမေ ဆို ထိုင်းရောက် စက တစ်နေ့ မှာ ထိုင်းသင်္ဘော သီးသုပ် ရယ်၊ ထိုင်း မုန့်လက် ဆောင်းစား လိုက် တာ အံ ပြီး ဆေးရုံ တန်းပြေးရတော့တယ်။ အဲ ဒီ သဘော လိုပါပဲ။
ကိုယ့် ရဲ့ စိတ်တွေဟာ အ ကုသိုလ် တွေ ပုံဖော် စားသုံး မိတာ၊ အာရုံကျက် စား မှားမိတာ များ သွားမိရင်တော့ မေမေ ဆေးရုံ ပြေးရသလို စိတ် Poison ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ထဲမှာ ရောဂါ စဖြစ်တော့တာပေါ့၊
အဲဒီအချိန်သေရင် တော့အပါယ် လေးပါး တန်း နေတော့ မှာ ပေါ့ ကလေးရေ..။
မသေခဲ့သေးရင် မှာ မေမေ တို့ သိမနေ တာ ကတော့ ကိုယ် မမြင်ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ရိပ် ဓာတ် ခိုး ၊ ကံ သတ္တိ ကညံ့ညံ့ လိုက် လာ ပြီးကောင်းတာ တွေ ကို ဆွဲ ယူနိုင်တဲ့ အင်အား တွေကျဆင်းသွားစေတယ် ဆို တဲ့ အချက် ပါပဲ..။ ဒါကို ဆရာတော် ကသင်ပေးခဲ့ တယ်..။
လေ့ကျင့် ခန်းတစ်ခုပေးမယ် ၊သားတို့ သမီးတို့ ပတ် ဝန်းကျင် မှာ Statistics Data ကောက် သလို လေ့လာ ကြည့် ပါ၊ အတင်းပြောတတ်တဲ့ လူ ရဲ့ ဘဝ အခြေအနေရယ် မပြော တတ် တဲ့သူ ရဲ့ ဘဝ(မြင့်လာသလား၊နိမ့်သွားသလား၊) ၊ ခံစား မှုနဲ့ လည်းတိုင်းတာ ကြည့်ပါ နော်၊ (ပူ လာ ပါသ လား။ အေးလာ ပါ သလား )..အဖြေတစ်ခု ကို ကိုယ် တွေ့ များနဲ့ ထုတ် ယူ၊တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး ကြည့်ပါကလေးတို့ရေ..။
ဆရာတော် တရား ပွဲ တိုင်းမှာ အထပ် ထပ် အခါ ခါ ဆိုရပါတယ်..။ကောင်းတဲ့အကျိုးပေး တွေကို တောင် မဆွဲ ယူ နိုင် တော့ ဘူးဆိုရင် နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ အဝေးကြီး၊ ကလေးတို့လည်းဆိုကြည့်ပါအုံး၊
နိဗ္မာန်လိုချင် သူများအတင်းမပြောနဲ့၊ ချမ်းသာလိုချင် သူများအတင်းမပြောနဲ့။
စိတ်နဲ့ အတင်းပြောတာလည်းအကြုံးဝင် ပါတယ် နော်၊ တစ်ယောက် ထဲ ပွ စိ ပွစိ နဲ့။ ( ဟင်း ခုမှ အမွှေးအတောင် ပြောင်နေတာ အရင် တုံးကတော့ ဘဲဥ တစ်လုံးနှစ် ယောက် စားတဲ့ ကောင်မက များ.......စသည် ဖြင့်...)
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားက
(အချိန်တိုင်းတွေးနေရင် ဘဝပြောင်းနေသည် )
လို့ ထွင်း ဖောက်သိမြင်သော စကားနဲ့ သတိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:36 AM2မှတ်ချက်ရေးရန်
ပစ္စည်းလေးပါး ၌ ရောင့်ရဲလွယ်ရမည်-သန္တုဿကော(၇)၊မွေးမြူလွယ်ရမည်-သုဘရော(၈)
ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး နတ် တွေ က ခြောက်လန့် လို့ ထွက် ပြေးလာတဲ့ ရဟန်း ၅၀၀ ကို မြတ်စွာ ဘုရား ကိုယ် တိုင် ဟော ကြား ခဲ့တဲ့ မေတ္တာ ပွားမည့် သူ ခံ ယူ နိုင် မဲ့ သူ တွေ အတွက် ကြိုတင် ကျင့် သုံး ရ မဲ့ မေတ္တာ ကြိုတင် ကျင့် ဘွယ် (၁၅) ချက် ကို ဆွေး နွေးရေးသား လာ ခဲ့တာ အခုဆို လို့ရှိရင် နံပါတ် (ရနှင့် ၈) ကို ရောက် ခဲ့ပါ ပြီ ကလေး တို့ ရေ။
သန္တု ဿကော ဆိုတဲ့ ပါဋ္ဌိ စကားလုံးကလေး က တော့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ လွယ်သူလည်း ဖြစ်ရာ ၏ လို့ ဆို လို ပါတယ် ကလေးရေ..။
ရောင့် ရဲ တယ် ဆိုတာ ကတော့ ကိုယ်ရလာ သမျှသော အစားအစာ ဥစ္စာ၊ ဂုဏ် သိန်၊ (ရဟန်းတော် များ အတွက်တော့ ဆွမ်း ၊ သင်္ကန်း၊ကျောင်း၊ ဆေး)ပေါ့လေ.။အဲဒါတွေ ကို အတိုင်း ထက် အလွန် မဖြစ်အောင် သတိရှိ၍ လက် ခံခြင်း၊ ရတန် သမျှ ရတာ ကို ပဲ ကျေနပ်တာ ကို ရောင့် ရဲတယ် လို့ ခေါ် ပါတယ်။
တင်းတိမ် တယ် ဆို တာ ကတော့ ကိုယ် နဲ့ ထိုက် တန် လို့ ရလာ သမျှ တွေကို မကျေမနပ်၊ မချင့် မရဲ ၊ ဒေါ သ ဖြစ် မနေ ပဲ နေနိုင်တာ မျိုးပေါ့ နောက် ပြီး သူ တပါးရတာ တွေကို နှိုင်း ယှဉ် ပြီး မလိုတမာ ဖြစ်တာ တွေကို မရှိ ပဲ နှစ်သက် စွာ သုံးဆောင် နိုင် တဲ့ စိတ် ကို တင်းတိမ် တယ် လို့ ခေါ် ပါတယ် ကလေး ရေ..။
မေမေ တို့ လူ သာ မာန် တွေ တော် တော် များ များ ကို ဇက် ကြိုး တပ် ပြီး လုပ် စမ်း ဟဲ့၊ ကြံ စမ်း ဟဲ့ ဆို ပြီး မောင်း နှင် နေ တဲ့ သူ ကတော့ ရောင့် ရဲ တင်းတိမ် နိုင် စွမ်း မရှိတဲ့ စိတ် ပါ ပဲ..။
မေမေ ဟို တနေ့ က မြန်မာ ပြည် ကလူ သတ် မှု သတင်းတစ်ပုဒ် ကို ဖတ်လိုက် ရတယ်..။ တရားခံ က ဈေး ကောက် အလုပ် လုပ်တာ၊ ကောက် လို့ ရတဲ့ ငွေ တွေကို အလွဲ သုံးစား လုပ်တယ် ။ လက်ရှိ အိမ် ထောင် နဲ့ ကလေး တွေကို ထား ခဲ့ ပြီး ဈေး ထဲ က ဖရဲ သီး သည် လေး နဲ့ ဖောက်ပြား ထွက် ပြေးကြ တယ်။
လှိုင် သာ ယာ ဘက် မှာ သွားနေပြီး စား ဘို့ ပြတ်လပ် လာ တဲ့ အခါ သည် လူ သတ် မှု ကို ရက် ရက် စက် စက် ကျူး လွန် ခဲ့ ကြ တာ ဖြစ် တယ်။ သွေးအေးအေး နဲ့ ကပ် ကျေး နဲ့ ထိုးသတ် ရဲ သည် ထိအောင် ရောက် ခဲ့ ကြရတယ်..။သား တို့ လည်း ကြား မှာ ပါ အဲ ဒီ သတင်း ကို သင်္ခန်း စာ ယူ ကြပါနော်..။
မေမေ က ကြိုက် လွန်း လို့ မှတ်ထားဘူးတဲ့ အိန္ဒိ ယ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် မဟတ္တမ ဂန္ဓီ ပြော ခဲ့ဘူး တာ လေး ကို သေချာ မှတ် ထားကြပါ..။
World is enough for the needs but not the greeds.
ဆက် စပ်ပြီး ပြော ရရင် တော့ အများကြီး ကျန် အုံးမယ် Environmental Awareness Lecture ပေးတာ တွေပါ ပါကုန် မှာ ပါ။
ဆရာ ကြီး ဦးသုခ ရဲ့ မေတ္တာသုတ် စာ အုပ် ထဲမှာ.. ပြော ပြထားတယ်။ အခု ထောင် ထဲ ကို ရောက် နေတဲ့ ရာ ဇဝတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ သူတွေကို စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတဲ့၊ ၈၀% သော သူတို့ ဟာ သန္တု ဿကော ဆို တဲ့ ရောင့် ရဲတင်းတိမ် မှုမရှိပဲ မတော် လော ဘနဲ့ ကြံစည် ကြိုးစား ခဲ့ ကြလို့ ပါ ပဲ တဲ့..။
(လော ဘအပို လို မလိုက် နဲ့ ကိုယ့်ထိုက်တာ နဲ့ ကျေနပ် စေ)မင်္ဂလ သုတ် မှာ လည်း ထပ် မှာ ထားပါသေးတယ်.အရေးကြီးလို့ ဆို တာ သိထားရပါမယ် ကလေးတို့ရေ..။
သည် ဂုဏ် နဲ့ ပြည့် စုံ ပြီ ဆို ရင် အထက် ကပြော ပြ ခဲ့ တဲ့ ၊ ဥဇု၊ သုဟုဇု ဆို တဲ့ ကိုယ် ၊နှုတ် စိတ်ထား ရိုးဖြောင့် မှန် ကန် တဲ့ ဂုဏ် အလို လို ဖြစ်လာ ပါတယ်..။ အနတိ မာ နီ ဆို တဲ့ မာန် မာ န ပါ ထိုက် သင့် သလောက် လျော့လာ တာပေါ့ ကလေးတို့ရေ..။ မုဒု ဆို တဲ့ စိတ်ထားနူး ညံ့ သိမ် မွေ့ မှု ပါ တစ် တွဲ ထဲ ပါ ဝင် လာ ပါတယ်..။
အခု ဆက် ပြော မဲ့ သုဘရော ဆို တဲ့ ဂုဏ် သည် လည်းပဲ သန္တု ဿကော ဆို တဲ့ ဂုဏ် နဲ့ ဆက် စပ် နေပါတယ်။
သု ဘရော ဆို တာ က မွေးမြူ လွယ် သူ ဖြစ်ရမည် တဲ့။ဆို လိုရင်း ကတော့ သူ တစ်ပါး အပြုစု မခက် စေရ ဘူး။မေမေ တို့ တွေ က နေရာ မျိုး စုံ မှာ ပုံစံ မျိုး စုံ တွေ့ ကြုံရမယ်။
သားသမီးနေရာ အမိ နေရာ။ ဆရာ နေရာ၊ သူများအိမ် ဧည့် သည် လုပ် တဲ့ အခါ လည်း လုပ် ရတယ်..။ အဲ လို နေရတဲ့ အခါ ဂျီး မများရဘူး ။ ကျွန် တော် ကလေ.. ကော် ဖီ ဆို နက်စ်မှ သောက်တာ၊ ကျွန်မ ကလေ..မွေ့ရာ မပါ ရင် အိပ် ကိုမအိပ် တတ် ဘူး။ ဆို တာ တွေက သူ များမေတ္တာ တုံးစေနိုင် သလို ဒုက္ခ ပေး သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မေမေ တောင် အီတလီရောက် စမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ၊ သည် မှာ က မြေထဲ ပင်လယ် သားတွေက နေ့လည် စာ ၊ ညစာ တွေမှာ ဝိုင် သောက် ရင်းစားတတ် တာ အလေ့အထ ပါပဲ ၊ မေမေ့အမြင်တော့ Alcohol 8-12% ပါဝင် နေတဲ့ သေရည် အရက် ပေါ့လေ..။
ပထမ မေမေ့ ဆရာ အိမ် မှာ မသောက် တတ် ကြောင်းပြော ဘူးတာ နဲ့ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမ တွေ ကိုယ် တိုင် ရေနွေးထတည် ကြ၊ လဘက် ခြောက် ထရှာကြ တာ ခုထိ အားနာ လို့ မဆုံးပါ..။နောက် တော့ မပြော တော့ဘူး။ အစား အစာ တွေကိုဘာ မှမပြော ပဲ ကြိတ် မှိတ် စား လိုက် တယ်၊ နောက်အံ တော့ တာ ပဲ၊ နောက်ပိုင်းမှာ ညစာ စား ပွဲ တော် တော် များများ မတက် ဖြစ်တာ ပဲ များပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော် ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ဆုံးမ ဘူးတယ်( ကိုယ့်ကြောင့် သူ တစ်ပါး ဝန် မကြီး ပါစေနဲ့)( မိမိ ကိုယ် ကို စောင့် ရှောက် ခြင်းသည် လော က အားစောင့် ရှောက် ခြင်းမည် ၏) ဆိုတဲ့ ဆုံးမ စကားကို အထပ် ထပ် ရွတ် ဆို တယ် သတိ နဲ့ ထိန်း ကြ မှ သာ သန္တု ဿကော၊ နှင့် သု ဘရော ဂုဏ် တွေ နဲ့ ပြည့်စုံပြီး မေတ္တာ ပိုင် ရှင် ကြီးတွေ ဖြစ် ကြမှာ ပါ..။ကြိုးစား ကျင့်တတ်ပါစေ၊ မြင့်မြတ်နိုင်ပါစေ။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:00 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:30 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
အခုရေး မဲ့ အကြောင်း ကတော့ သူများကို ဆုံးမ မဲ့ အလင်းစကား မဟုတ်ပဲ..ကိုယ့်ကို ကို ပြန် ဆုံးမ ရမဲ့.. ဆင်ခြင် တုံတရား လက်ကိုင်ထား ခိုင်းရ မဲ့..စကား ဖြစ်နေပါတယ်..။ ကိုယ်ဖော် တဲ့ ဆေး ကိုယ် စား ရမယ်ပေါ့ လေ…။
ဆရာတော် ဘုရားကပြော ဘူးတယ်.. မိဘ တွေ.သတိထားဘို့..။ မိဘတွေက ဆရာတော် ထံပါး မှာ တရားနာ ပြီး ကြီးပွားရေး သော့ချက်တွေ..ဘ၀အောင်မြင်ရေးတွေ.. သိလာ ပြီးတော့.. သားသမီးတွေကို အတင်းပုံသွင်းကြတော့ တယ်..။
ပုံသွင်းပြီး ဆိုကတည်းက..မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ..လိုက်နာ ကျင့် သုံးတာ.. လ်ိမ္မာ တာ..အောင်မြင်တာတွေ အကြီး ကြီး ပုံဖော်ကြတော့တယ်..ပုံဖော်တဲ့ အတိုင်း မဖြစ်လာတော့အ ပူဓာတ်တွေ ထွက် ပြီး အကုသိုလ် နယ် ထဲကို ရောက် မှန်း မသိရောက်နေ ကြရတတ်တယ် တဲ့။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးက (သူများ ပြင်ရင်းနဲ့ ကိုယ် ပါ ပျက် ပျက်လိုက်လာ တာ သတိ ထားရမယ် တဲ့) သိပ်ကို မှန်တဲ့ စကားပါ..။ တာဝန်ကျေပစေ..သံ ယော ဇဉ်မထားနဲ့ ဆိုတာ တောင်တန်းသာ သနာ ပြု ဆရာ တော် ကြီး ဟော ဘူးတာ ရှိပါတယ်..။သံယောဇဉ်မပါတဲ့မေတ္တာသန့်သန့် ဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်..။ အရာရာကို အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်..ဆိုပြီးကြိုတင်နှလုံးသွင်းထား မှသာ..အလင်းစေတမန်.. မီး မပျက် ပဲ အမြဲ..အလင်းဖြန့်ဝေနိုင်မှာ ပေါ့လေ..။
မုဒုဆိုတာ စိတ်ထားနူးညံ့ သိမ်မွေ့နေရပါမယ်.. မုဒု ဂုဏ် နဲ့ ပြည့်စုံမှသာ သူတစ်ပါးကို မေတ္တာ အပြည့် ထား နိုင် ပွားနိုင် မှာဖြစ်သလို ကိုယ့် ကလည်း မေတ္တာ ကို ခံယူ နိုင် စွမ်း ရှိ မှာ ကလေးတို့ရေ..။
နူး ညံ့ သိမ် မွေ့တယ် လို့ပြောရင် ကာ ယကံ၊ ဝစီကံ စတာ တွေမှာ ချို ချို အေးအေး လေး ပြောတာကု ထင် တတ် ကြတယ်။ အပြောလေး ကချို ပြီး အတွင်းစိတ် က ကောင် ကျစ်လှ စွာ ပျက် စီး ရာ ပျက် စီးကြောင်းတွေ ကြံစည် နေမယ် ဆိုရင် အဲ ဒီ ချိုသာ ပျော့ပြောင်းမှုဟာ မုဒု ဖြစ်တယ် မခေါ်ဆို ထိုက် သေးပါ ကလေး တို့..။
ကျေးဇူးတော် ရှင်ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး စကားနဲ့ ပြောရရင်.. သူ့ ဘဝ သည်ကိုယ့် ဘဝ ၊ သူ့ ခံစားမှု သည် ကိုယ့် ခံစားမှု၊ သူနောင် ရေး သည် ကိုယ့်နောင်ရေး စသည် ဖြင့် စိတ်ပါဝင် စား စွာ သူ့နေရာ မှနားလည် မှု များစွာ ဖြင့်တွေး တော ပြီး နှလုံးသား ကို ထပ်တူ ပြုထားရ မယ် တဲ့..။
ဒါမှသာ စစ် မှန် သော မေတ္တာ ကို ပွားများနိုင်မှာ ပါ။ ရေ တစ် ခွက် လှူ တာ တောင် စေတနာ သန့် သန့် နဲ့ ရေငတ် လာ သော နှလုံးအိမ် ကို အာ ရုံပြု ပြီး သောက် ပြီးသည် ထိ စောင့် ကြည့် ကာ အပေး နဲ့ ပျော် တတ် ဘို့ သင် ပေးတော် မူပါတယ်..။ပစ္စည်း အဓိ က မကျဘူးနော်..။ စတင် ကျင့်ကြံ ကြည့်ရအောင်။
နောက်သတိထားရမှာ ကတော့..သိမ်မွေ့စွာ ခြေဖေါ့နင်းပြီးဝင်ဝင် မင်းမူတတ်တဲ့.. မာန။ မာနကိလေသာ ဆိုတာ..အရဟတ္တမဂ် ရမှသာ ပယ်သတ်နိုင်တာဖြစ်တော့ သာ မာန်ပုထုဇဉ် လောက် ကတော့ ချာလပတ်ရမ်းနေတာပေါ့လေ..။ ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့.. သတိနဲ့ လွန်ကဲ မှု မဖြစ်အောင် ဉာဏ်နဲ့ ထိန်းဘို့ မေမေ့ကိုယ် ကို ကို မေမေ ပြန်ပြောနေရပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
ကောင်းတာတွေလုပ်နေပေမဲ့..တရားထိုင်နေရင်း ဖြစ်တတ်တာ.. ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ငြိမ်နေတာ ပဲ..ငါမို့သာ လုပ်နိုင်တာ..ရှေ့ကမိန်းမလှုပ်လိုက်တာ….အခန်းထဲရောက်မှသင်ပေးအုံးမှ…။
ငါမှသာလှူ နိုင်တာ၊ ငါလိုလူမို့သာ..သိတတ်နားလည်တတ် ကျင့်သုံးတတ်တာ..။ငါလို အမေ မျိုး မို့သာ သည်လို ရေးနိုင်တာ..ဖန်တီးနိုင်တာ..။မသိစိတ်က နှိုင်းယှဉ်နေမိတတ်တယ်ကလေးတို့ရေ..။
မာန ဆိုတာ နှိုင်း ယှဉ်ပြီး ငါက သာတယ်ပေါ့..။ မူလဓမ္မဆရာတော် ဦးဝိဇယပြောတာကို မေမေ အမြဲရွတ်နေရပါတယ်..။(အားထုတ် သမျှ မှာ ကိလေသာ၊ဖြစ်မလာ မှလမ်းမှန်သည်။)..ဒီတော့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ဘာ ပဲ လုပ်လုပ်..မာန ကိလေသာ မ၀င်အောင် သတိထားနေရပါတယ်..။ မဟုတ်လို့ကတော့ ကုသိုလ်အမည်တပ်လျက်.. လမ်းမှား ပေါ်လျှေက်မှန်း မသိ လျှောက် နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ကလေးရေ..။
မဟာမြိုင်တောရ ဆရာတော် ဦးဇော တိက က ပြောဘူးတယ်..ပညာ တတ်တွေကို.. သူလေးစားပါတယ်..တဲ့ ဒါပေမဲ့..တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ တွေ..ပါရဂူ ကြီးတွေမှာ..တွေ့ရတတ်တာ..Psychic Inflation ဆိုတဲ့ စိတ်ဖောင်းပွမှု ဖြစ်နေတတ်ပြီး..ကိုယ်ထက် ရာထူး၊ အသက်၊ ဂုဏ် ငယ်တဲ့သူတွေပြောတာကို လက်ခံဘို့ရာ ငြင်းဆန်ကြပါတယ်တဲ့..။ ငါ့လောက် သိသူမရှိ ပါဆိုတဲ့ မာနကြောင့်ပါ် တဲ့..။
ရောမ ခေတ်က ဂရိတွေးခေါ် ပညာ ရှင် Socrates က ပြောခဲ့တာ…ကလေးတို့ နှစ်သက်မှာပါ..
မေမေလည်းသားဆီက သမီး ဆီက..သင်ယူနေရပါတယ်..သင်ပေးကြပါအုံးကလေးတို့ရေ..။ဆရာတော်တပါးကလည်းပြောဘူးတယ်.သူရေးတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာ ကျမ်းစာ အုပ်ဟာ..ဘုရားဉာဏ်တော် ကို မဟာ သမုဒ္ဒရာ နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး..သမုဒ္ဒရာ ကို ယုံ သူငယ် ထောက်သလိုရေးရတာ ပါလို့ ပြောတာ မေမေမှတ်သားဘူးတယ်..သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ မြတ်နိုးဘွယ်၊အတုယူဘွယ် စိတ်ဓာတ်လေးတွေ ပါကလေး တို့ရေ..။
အခုမေတ္တာကြုိုတင်ကျင့်ဖွယ်ထဲက နံပါတ်၆ဖြစ်တဲ့ အနတိမာနီ= လွန်ကဲတက်ကြွသော မာနမရှိရာ ဆိုတာ နှလုံးသွင်းဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်..။ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ တပည့် တွေကို အထပ်ထပ် ဆိုခိုင်းတာ..
မာနသည် ကျေးဇူးတရားကို မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထား၍ ဒဏ်(၁၀)ပါး သင့်စေသော အဆိပ်အတောက်တွေလို့မေမေအမြဲပြောခဲ့ တာပေါ့ ကလေးတို့..။အဆိပ်အတောက်တွေ စုဆောင်းမိနေမှတော့ အေးမြတဲ့ မေတ္တာကိုဘယ်ပွားများနိုင်ပါတော့မလဲ..စဉ်းစားကြည့်ပါလေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:52 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
Secret of Success III (သို့မဟုတ်) သက္ကော ဂုဏ် နဲ့ပြည့်စုံကြသူများ
မေတ္တာ ပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်အောင် ကြိုတင် ဖြည့်ဆည်းရမဲ့ အချက် ၁၅ချက် ကို ဆွေး နွေး ရေးသား နေတုံးမှာ ပဲ တိုက် ဆိုင် လှ စွာ သာဓုခေါ် ဆိုရမဲ့ သတင်း တစ် ပုဒ် ကို လက် ခံရရှိခဲံပါတယ်..။အဲဒါကတော့ AIT’ian မောင် ညီမ များရဲ့ (ဒုတိယ အကြိမ် ခင် ပွန်း ကြီး ၁၀ ပါး ပူဇော် ကန် တော့ ပွဲ )သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးတို့ ကတော့ ထင် မယ် မေမေ က AIT Community ကို သိပ် အထင်ကြီး အမွှန်းတင် တာ ပဲလို့်ထင်ကြမယ်။ ဥပမာ ပေးရရင် တော့ လူ့ ဘ၀ ကို (မနုဿတ ဘာဝ ၊ ဒုလ္လဘ=ရတောင့်ရခဲသောတရား) လို့ပြော သလိုပေါ့လေ..။ လူဖြစ်စေ နိုင်တော့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု တွေ ပြု ခဲ့လို့ သာ ရခဲတဲ့ လူ့ ဘ၀ကို ရခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါ ကို ကျေး ဇူးတော် ရှင်မြတ် စွာ ဘုရား က လက် သည်းခွံ ပေါ်က မြေ မှုန် နဲ့ မဟာ ပထ၀ီ မြေကြီး နဲ့ နှိုင်းဆပြခဲ့ပါတယ်..။
သည် လိုပါပဲ AIT ဆို တာ က ကုသိုလ် ကောင်း မှု စုဆောင်းထား ပြီးသားရှိသူတွေ မှ ရောက်လာ ကြရတတ် တယ်။ တို့များ ကတော့ ပါရမီ နည်းခဲ့တော့ ခက် ခဲလှစွာ ဖြတ်ကျော် ရင် ဆိုင် ခဲ့ရပါတယ်..။ ပညာ သင်ဆုတွေရတယ် ဆိုတာ ဒါနပါရမီ၊ ပညာ ပါရမီ ကို်ထူး ကဲ စွာ ဖြည့် ကျင့် ပြီး သားဆိုတာ မှန်း ဆနိုင် တွေးကြည့်နိုင်သလိုပါပဲ။
ထိုင်းကို ကြွ လာ သမျှ ဆရာတော် ၊ သံဃာတော် များ ကို အနီးကပ် ပူဇော်ဆည်းကပ် ခွင့်ရကြ သလို တကယ် လည်း ပီပြင်အောင် လုပ် ဆောင် တတ်ကြပါတယ်..။ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဆိုရင် AIT ကျောင်းသားတွေ ဟာ လေးနက်တဲ့ အတွေးအခေါ် ကို ခံယူ နိုင် စွမ်း ရှိ တယ် လို့ ယူဆထားပြီး တရား တော် ကို မြှင့် မြှင့်ဟောရ ကြောင်း မိန့်ကြားဘူးပါတယ်..။ချမ်းမြေ့ ရိပ်သာ မှာလည်း AIT က လို့ပြောရင် တရားစာအုပ်တွေပေး ဘို့ ကူညီ ဘို့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး က မှာ ကြား ထားတော် မူပါတယ်..။
မေမေ တို့ ကျောင်းတက် တုံးက ဆရာမကြီးဒေါ် မြင့် မြင့် သိန်း ဟာ ပထမဆုံး နဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော မြန်မာ အမျိုးသမီး ပါမောက္ခ တစ်ဦး ပါ ။ ပုံ မှာ ပါတဲ့ ဘုရား ဆင်းတုတော် ကို ဆရာမ ကြီးတို့ မိသား စု ပူဇော် လှူဒါန်း ခဲ့ တာ ဖြစ်သလို ဆရာမကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက် မှာ ကျောင်းရဲ့ ဘာ သာရေးလှုပ် ရှား မှုတွေ ပီပြင်ခဲ့ ပါတယ်..။
အခုဆိုရင် မြန်မာ အမျိုး သမီး ဆရာမ ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ် ခင် နီနီသိန်း ဟာ AIT , Vice President အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေတာ မုဒိတာ ပွားစရာ၊ ဂုဏ် ယူ စရာ ဖြစ်ပါတယ်..။ဒါတွေကို ထောက်ရှု တွေး ဆပြီး မေမေ ဆိုရင် ကိုယ် က အသက်ကြီးပေမဲ့ ငယ်ရွယ်ကြတဲ့ မေမေ့ Senior တွေကို အမြဲ ကို၊ မ တပ် ခေါ် ခဲ့ ပါတယ်..။( ဆရာမ မနီတာ၊ ဆရာ ကို ကျော် ငြိမ်းအေး၊ ဆရာကို စံဟိန်း၊ မ၀ါ၊ အကျိမသန်း ခင်၊ မဟေ၊ မပေါက်၊ ကို တင်အောင် မိုး၊ ကို ကြံ၊ကို ရှိန်၊ ကိုမျိုးထွန်း၊ကိုကျော်မိုးလေး၊ ကို ကျော် ဆန်းဦး၊ ကို ကျော်သူ၊ကိုတာ၊ မမေသူ၊ မမို့၊ မမို စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ..။)ငယ် သော်လည်း ကိုယ့်ထက် ဒါနပါရမီ ပညာ ပါရမီ ရင့်ကျက်တဲ့နေရာ မှာ သာလွန် ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား..။ AIT မှာ က Senior လက် ဆင့်ကမ်းမှ သင်ပေးပြင်ပေးမှ.. အဆင်ပြေပြေ နေနိုင်ကြတယ် ဆိုတာ ကို သိမှတ်ကျေး ဇူးတင်နေ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဇုလိုင် သြဂုတ် လ တွေမှာ မေမေ ဟာ အကြောင်းတိုက် ဆိုင်စွာ..AIT မှာ ပထမ အကြိမ် ခင် ပွန်း ကြီး (၁၀)ပါး ပူ ဇော် ပွဲ ကို အတူ တကွ ကုသိုလ် ပြုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..။သူတို့ အားလုံးရဲ့ ကျင့် နိုင် စွမ်း ရှိသော ဂုဏ်( သက္ကော) ဆို တဲ့ ဂုဏ် ကြောင့်ပါ..။ကောင်းတဲ့ အကျင့် ရယ်လို့ ဆုံးဖြတ် နိုင်တာ တွေ..တရား ဓမ္မ ကိန်း ၀ပ် ထိုက်တန် သောအ စွမ်းသတ္တိ တွေ ရှိ နေတာ လည်း ပါတာ ပေါ့လေ..။
လက်ရှိ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ အသင်း ဥက္ကဌ မသက်ထားမြင့် ၊ကို မိုးသူအောင်တို့ကလည်း ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရား ရဲ့ တပည့် တွေ ဖြစ်နေ ကြတာ.. တိုက် ဆိုင် မှုတော့မဟုတ်ပါ..။ အကြောင်းဆက်တွေ ရှိ နေပါလိမ့်မယ်။ ၀န်ထမ်း အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆေင် နေကြတဲ့ ဆရာမဒေါ် နွဲ့ နွဲ့ ရီ၊ မမို မိုတင်(Sirikhit International Institute of Technology)၊ ကို သောင်းထွဋ်အောင်(School of Civil Engineering)၊ ဒေါက်တာ မသန်းခင်(Shinawatra University) တို့ ရဲ့ ပါရမီ တွေဖြည့်ကျင့်ရင်း အားဖြည့် ပံ့ ပိုး ခဲ့တာ ကလည်း ၀မ်းမြောက် ဖွယ်ရာ ပါ..။
ဘာ သာရေး ကိုင်းရှိုင်းကြတဲ့ ၊ ချယ်ရီ ၊ စနိုး၊ မေဆုဟန်၊ ကို မိုးသူအောင်၊ မြတ်ဆုထွန်း၊ နေရီ၊ စံစံအိ၊သင်းနွယ် ထွေး တို့တွေကလည်း AIT မှာ အစဉ် အဆက် ထိန်းသိမ်း ခဲ့ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရေး လှုပ် ရှား မှုတွေကို မျိုး ဆက် သစ် တွေ ထံ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ကြလိမ့် မယ် လို့လည်း မျှော်လင့် ယုံကြည် မိပါတယ်..။ဆရာမ ဒေါက်တာ မသန်းခင် ကလည်း တူတူမ တွေကို ပြန် လည်သင်ကြား လက်ဆင့်ကမ်း ပေးမယ်လို့ စီစဉ် နေပါတယ်..။
ကောင်း သော ကျင့် စဉ်များ ကို ချက်ချင်း ခံယူ ကျင့် သုံး နိုင်သော၊ ဖြည့်ကျင့် နိုင် သော၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိသော၊( သက္ကော) ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံကြပါပေတယ် ချီးကျူးရင်း နဲ့ ထပ် တူထပ်မျှ သာ ဓုခေါ် လိုက်ပါတယ်..။
သက္ကော ဂုဏ် ကို အထွဋ် တင် ပြီး ပြော လိုက်ရပေမဲ့ တကယ် တွေး ကြည့်ရင်..လွန် ကဲ တက် ကြွ သော မာန်မာန မရှိတဲ့(အနတိမာနီ) ဆိုတဲ့ ဂုဏ် လည်း ရှိကြပါတယ်..။ ရင့်ကျက်သော ဉာဏ်ပညာ ရှိခြင်း(နိပကော) လည်း ဖြစ်ကြပါတယ်..။
မာန တွေ ခံ နေခဲ့ လျင် ဖြင့် ဘာ တွေ ဆရာလာ လုပ် တာလဲ..။ ငါတို့ က သိပြီးသား လို့တုံ့ ပြန်ကြမှာ ပေါ့ လေ..။မာန ရှိနေ သရွေ့ ၊ ခံနေသရွေ့ တော့ ကျေး ဇူး တရားသိခြင်း ၊ တုံ့ဆပ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ အောင်မြင်ရေးသော့ချက် ဟာ ဖွင့်ရ ခက် ခဲ နေကြ လိမ့် အုံးမယ်..။ ကျေးဇူးတော် ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာ တော် ဘုရား ကမိန့်တယ်..၊ အပြစ်တွေ ကို ၀န်ချတောင်းပန်တယ် ကန်တော့တယ် ဆိုတာ..Computerထဲက file တွေ ကို delete လုပ် သလို လုပ် ပစ်တာ ပါ ပဲတဲ့..။ ကိုယ့် ကို ပြစ်မှားစော်ကားသူတွေကိုပါ ကျေအေး ကြရတယ် မဟုတ်လား။
ဒါဆိုရင် ကြည်လင် သန့်စင် သော စိတ်ထားများဖြင့် ဘ၀ခရီး ကို ငြိမ်အေး စွာ လျှောက် လှမ်း နိုင် ကြပါလိမ့်မယ်..။ Secret of Success I မှာပါတဲ့ ပုစ္ဆာ ၂ ခု မှ ကောင်းကျိုး များ ပြည့်စုံတဲ့ Today/Tomorrow Asian Leaders များ ၊ပညာပြည့်ဝနှလုံး လှကြသူတွေ အဖြစ် လောက အလှ ဆင်နိုင်ကြတော့မှာ ကို မြင်ယောင်ရင်း အားတက် ကြည် နူး မိပါတယ် ကလေး တို့ရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 2:39 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သစ္စာတရားကိုဝင်းမြင့် နှင့် အဖြူရောင် မေတ္တာကိုဖိုးသားသို့
၁၉၉၈ လောက် ကမှ စပြီး ဆရာတော် ဘုရားတွေ ရဲ့ တရားတော် တွေကို နာ ယူပြီး ၊ နားရည် ဝ နေခဲ့ ရ သလို တကယ် လည်း လိမ္မာချင် စိတ် တွေ ပေါက် ခဲ့ရပါတယ်..။ စကားပြောရင် လည်း တရားတော် တွေထဲက ဥပမာ တွေကို ပြော နေဖြစ်တာ ကို ပတ် ဝန်းကျင် ကသတိထားမိကြပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ပြန်လည် ဖြန့် ဖြူး ရ လိမ့်မယ်လို့ကြိူတင် မိန့်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်..။အကြောင်းပြည့်စုံလာ တဲ့ တစ် နေ့ကို ရောက် ခဲ့ တော့ သည် ဘလော့လေး ကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ တို့ ကျောင်းနေတုံး ကဆိုရင် စာ စောင်ထုတ် ဘို့ဆိုတာ ဖယောင်း စက္ကူ မှာ ကညစ် လို့ခေါ်တဲ့ အပ် ချွန် ချွန် နဲ့ ဖောက် ရတာ တော် တော်လေးကို ပင် ပန်းပါတယ်..။ ပြီးမှ စာ ကူး စက်မှာ မှင် ထည့်ပြီး လှည့််ထုတ်ရတာ ၊ ကိုယ့် ကဗျာ လေးတွေ စာ လေးတွေကို မှင် အမဲ လေး နဲ့ မြင်ရတဲ့ ပီတိ က မမေ့နိုင် စရာ ပါ..။
အခု ခေတ်တော့ သည်လို ကိုယ် ဂျာ နယ် မှာ ကိုယ် ပဲ စာရေး၊ဆရာ ကိုယ် ပဲ ဒီဇိုင်းဆရာ၊ ကိုယ် ပဲ အယ် ဒီတာ၊ ကိုယ် ပဲ ထုတ် ဝေ သူ ။စာပေစိစစ်ရေးကို လည်းတင် စရာ မလိုဘူး။ ချက် ချင်းလည်းမြင်ရတာ ဆို တော့ ကျောင်းတုံးက ဗီဇ က ထက် သန် ပြင်းပြလာ တာ ပေါ့လေ..။ ဒါကလည်း အကြောင်းတစ် ကြောင်းပေါ့.။
တရား ဝေငှတဲ့ အခါ ဆရာ လုပ် သလို၊ အမိန့်ပေးသလို ပုံစံ မျိုးမဖြစ်ရအောင် ငါကပိုသိတယ် ဆိုတဲ့မာန လေသံတွေ ကင်းစင်ရလေအောင် အမေ က သားသမီးတွေကို ဆုံးမ တဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ် ခဲ့ရပါတယ်..။ တကယ် လည်း သား သမီး ၂ယောက် ရဲ့ အဝေးမှာနေရတဲ့ မိခင် တစ်ဦိးပါ..။
မရေးသားခင် ကို ဝင်းမြင့်တို့ ကို ဖိုး သားတို့ ရဲ့ ဆိုက် ကလေး တွေက အတုယူစရာ၊ ဆရာတင် စရာ လေ့လာ ခဲ့ရတယ် အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်နေပါတယ်..။ဖန်တီး မှု အစုစုတွေကိုလည်း သာဓုခေါ်ရပါတယ်၊ လေးစားမှု နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ဟို တလော က ကျွန်မ Email ထဲကို လိင် မှု ပိုင်း ဆိုင်ရာ ၊ပုံတွေ ထင်ထင် ရှားရှား ဖေါ်ပြထားတဲ့ Blog တစ်ခု ရဲ့ Link ကို ပို့တာ ခံရဘူးပါတယ်။သေချာ စစ်လိုက်တော့BCC နဲ့ လူ တွေ တော် တော် များများကို ပို့ တဲ့ ပုံ ပါ ပဲ..။ ကိုလတ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသားနံမည် နဲ့ပါ..။
နည်းပညာတိုး တက် မှု ဟာ မီးလို ပါပဲ ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင် သလို ဆိုးကျိုး တွေ ကလည်း အားကောင်းစွာ လိုက်ပါ ကြတာ ကျွန်မ သတိပြုမိပါတယ်..။
Internet Cafe မှာ အချိန်တော် တော် များများ ကုန်ကြမဲ့ နည်းပညာ သစ်ကိုလိုက် စားကြသူ လူငယ် တွေ အ တွက် ကျွန်မ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
Biological need ဖြစ်ပေမဲ့ လွန်ကဲ မှု ဟာ စိတ် စွမ်းအား ကိုယ် စွမ်း အား လမ်းမှားရောက် စေနိုင်ပါတယ်၊အခုလို ကျွန်မတို့တို့အားလုံးရဲ့ ကြိုးပမ်း မှု တွေဟာ၊ တစ် ချို့ တစ် ချို့သော နေရာ တွေ အတွက် မီးလျှံ ကြားကရေစင်၊ ကန္တာရကြား မှ အို အေ စစ် ဖြစ်တန် ကောင်း ပါရဲ့လို့ ဆုတောင်းရပါတယ်။
ကိုဝင်းမြင့် တို့ ကို ဖိုးသားတို့ တွေ က တော့ အဆင့်မြင့် မိုးကုတ် ဆရာ တော် ဘုရားကြီးရဲ့ တရား သံ တွေ ထုံ မွှမ်းထား တော့ ဘုန်းကံ လည်း ကြီးမားကြပါပေတယ် လို့ ထပ် မံ ၍ ချီးကျူး စကားဆို ချင်ပါတယ်.။
ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဆုံးမထား ဘူးတာ က မဂ် ဉာဏ် ဖိုလ် ဉာဏ် ဆောင် နိုင် တဲ့ အရည် အသွေးရ ဘို့ ဆိုတာ က ပါရမီ ရင့် ကျက် ပြီးသား မှ ဖြစ် နိုင် တာ ပါ တဲ့..။ဘုန်း ဆို တာ ကလည်း (ပုည =ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခြင်း) ဆို တဲ့ ပါဋ္ဌိ ကနေ ပုဉ်း ဖြစ်ပြီး ဘုန်း သို့ ဆင်းသက် လာ တယ် ဆို တာ ကို ဝင်းမြင့်တို့ က ပို သိပါတယ် လေ..။
ကျွန်မ ရဲ့ Target Group က ကလေးများဖြစ်လို့ ပါရ မီ ကျင့်စဉ် များ ကသာ စတင် လိုက် ပါတယ်..။ပါရမီ ကျင့် စဉ် များ မှ တဆင့် ကြိုးပမ်းရင်း သစ္စာ ပန်းတိုင် ဆီိသို့ လျှောက် လှမ်းရမှာပါ။ ပိုင်း လော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးကလည်း တရား ဟော တယ်(သည် မှာ တော့ မျှ ဝေ တယ် ပေါ့လေ..။ ) ဆို တာ ကျင့် ဆဲ(သို့မဟုတ်) ကျင့်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ် မှသာ ပြုလုပ် ပါ လို့ ဆုံး မ ခဲ့လေ တော့ ကျွန်မသည် ကျင့် ကြံ အားထုတ် ဆြဲဖစ်ပါတယ်..။
ကျင့် ဆဲ ဆို ရင် ဓမ္မ ရသ ကို ခံ စားရမယ်၊ ကျင့် ပြီး ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုရင် ဝိမုတ္တိ ရသကို ခံ စား ရ မယ် ဆို တာ ဆရာတော် ဘုရားဟော ကြား တော် မူပါတယ်..။ အဲ သည် ဓမ္မ ရသ နဲ့ တင် မျှ ဝေ ချင် စိတ်ဖြစ် လာ ခဲ့ရတာ ပဲ ဆို ပါတော့။
ကျွန် မထက် အသက် များ စွာ ငယ် သော် လည်း ပညာ ဉာဏ် ရင့် ကျက် မှု ရှိခြင်းကို သာဓု ထပ် မံ ခေါ်ဆို လိုက် ပါတယ်..။
ရွှင်လန်း ထက် သန် စွာ ဓမ္မ ခရီး ကို
ိုကြီး မြတ်သော လုံ့လ ဖြင့်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:24 PM 1 မှတ်ချက်ရေးရန်
သားရေးတဲ့ comment လေး ကို Post အသစ် တင်ရင်းဖြင့် Response လုပ်ပါရစေ..။
ဓမ္မ Web site လေးတွေတော် တော် များများကို လည်ပတ် ဖတ်ရှုရင်း တော် လိုက်တဲ့ ကလေးတွေ..ကိုယ် ငယ် ငယ် က သည် အရွယ် မှာ လဘက်ရည် ဆိုင် ချိန်ပြည့်ထိုင်၊ ကဗျာ ရူး စာ ရူး ၊တစ်ခါ တစ်ခါ ဦးတည် ချက် တွေလည်း မဲ့၊ မိုက် လည်း မိုက် ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
အခုကလေးတွေ ရဲ့ ဘဝတွေက အဓိပ္ပါယ် ရှိလိုက်ကြတာ လို့ လှိုက် လှိုက် လှဲ လှဲ ချီးကျူး မိပါတယ်..။ ကုသိုလ် အင်အား များပြားနေသူတွေမှ သာ သည်အလုပ် ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူး စွာ၊ လှိုက် လှိုက် လှဲ လှဲ ထက် ထက် သန် သန် လုပ် နိုင်ကြတာဖြစ်လို့ သာသနာ တော် ကို ကာ ကွယ် စောင့် ရှောက်ကြ တဲ့ ရှေ့တန်း ခံတပ် မှူးတွေ ပဲလို့လည်း တင်စား ထင်စားဝံ့ပါတယ် ကလေး ရေ..။
သားအရင်း ရဲ့ Blog မှာ ကတော့ Romantic Feeling တွေ ပြည့်လျှမ်းနေလေတာ့ ကိုယ့် တုံး ကလိုပဲလို့ နားလည် ပေးရပါတယ် သားရေ..။
တကယ် တော့ လည်း အနမတဂ္ဂ ဘ ဝသံသရာ မှာ ဘဝ တွေက အ သင်္ချေ ပေါင်း အနန္တ လို့ ကျေးဇူးတော် ရှင်မြတ် စွာ ဘုရား ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်..။ တသင်္ချေ ဆို တာ က ၁ နောက် မှာ သုည အလုံးပေါင်း ၁၄၀ ရှိ တယ် လို့ မှတ် သားဘူးပါတယ်..။
အခု ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ၆၀၀၀ကျော် ပဲ ရှိတာ ဆို တော့ အာလုံး ဟာ မိဟောင်း ဖဟောင်းလို့ ခံယူ ဆက် ဆံရမယ်လို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရား က သင်ကြားပေးဘူးပါတယ် ကလေးရေ..။မတော် စပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အမိအဖ မရှိဘူးပေါ့လေ..။အကြောင်းဆက် တွေ ရှိ နေကြ တာ ၊ ရှိနေကြမှာ အသေအချာ ပေါ့ ။ မေတ္တာ တရားမှာ ခြံစည်းရိုးခြားပြီး ငါ့ မိသားစုမှ၊ ငါ့ ဘာ သာ မှ ငါ့ လူမျုိုးမှ ဆို ပြီး ကွက် ကြား မိုးရွာ ရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့လေ..။
သည် လို သည်လို များပြားလှတဲ့ ဘဝ တွေကို အဝိဇ္ဇာကြီး စိုး ပြီး ဖြတ် သန်းခဲ့တာ၊ ငါ့ သား ၊ ငါ့မယား၊ငါ့ ကိုယ်၊ ငါ့ ဟာ ငါ့ ဥစ္စာ ဆိုတဲ့ သက္ကာ ယဒိဋ္ဌိ အစွဲ နဲ့ တို့ များ အပါယ် လေးပါးလည်း ကျ ခဲ့ဘူးမှာ ပါပဲ ကလေးရေ..။
မေတ္တာ နဲ့ ကျေး ဇူး တရားကို သိမြင် ဘို့တော ကျေးဇူးတော် ရှင်မြတ် စွာ ဘုရား က သမုတိ သစ္စာ ကို မပယ် ခိုင်းဘူးဆို တာ သားလည်းသိမှာပါ..။
သားဆုတောင်းပေးသလို သက္ကာ ယဒိဋ္ဌိ အစွဲ ကို မဂ် ဉာဏ် နဲ့ ပယ် သတ် နိုင်တဲ့ အထိ ကြိုးစား သွား မယ် ဆိုတာ ကတော့ အခုလူ့ဘဝ ရဲ့ အန္တိ မရည် မှန်းချက် ပါပဲ..။
တရားရဘို့ ဆို တာ ကလည်း အချက် ၃ ချက် အဓိက အရေးကြီးတာ ပေါ့လေ..။
၁။ မိတ် ဆွေကောင်း
၃။နှလုံးသွင်းတည့် ရမယ် ဆို ထားတော့
တို့ များ သံသရာ ခရီးသည် တွေ အတွက် မိတ် ဆွေကောင်း တွေရဲ့ သစ္စာ ဉာဏ် ရောင် ၊ဓမ္မ အလင်းရောင် တွေ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ တဲ့အခါ.. အဝိဇ္ဖာ အမှောင် ပျောက် လွင့် သွားမှာ ကို အသေအချာ ယုံကြည် မိပါရဲ့ ကလေးရေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:27 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
လူဆိုတာ သူတပါးအပြစ်ကိုမြင်လွယ်ကြတယ်..။အပြစ်တင်လွယ်ကြတာ သဘာဝတရားပါပဲ..။ ကိုယ့်အပြစ်ကိုထောက်ပြရင်တော့ ဆတ်ဆတ်ခါနာတတ်ကြတယ်..။.
လူ့ သဘာဝ သူသူ ကိုယ်ကိုယ် အားနည်းချက်ဆိုတာရှိကြစမြဲ ဆိုတော့..အဲဒီအားနည်းချက်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖုံးကွယ်ဘို့ ကြိုးစားကြတာ..ကို ကြုံရတာများတော့ မေမေက မသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်တာ တောင်အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ..။
မေမေဟာ သူများကိုအပြစ်ပြောတာအကျင့်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ကိုဝေဖန်လာရင်တော့..ဒေါသနဲ့ မတုံ့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဝမ်း နည်းညှိုးငယ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်..။ မျက်နှာလည်းပျက်တတ်တယ်..မကောင်းတဲ့ အကျင့်ပေါ့..။သည် အကျင့် ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေလည်းများစွာ ပျက်ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ဒါဟာလည်းဆုတ်နစ်တဲ့ဒေါသပါပဲဆိုတာ တရားတွေနာ ယူမှ နားလည်ရပါတယ် ကလေးရေ။ ပြန်ပြီးရန်တွေ့ရင်တော့တက်ကြွသော ဒေါသပေါ့..။
မေတ္တာရ ရှိစေနိုင်မဲ့ကြိုတင်ကျင့်ဖွယ် ၁၅ချက်ထဲက (သုဝစော= ဆိုဆုံးမလွယ်ရမည်)ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ယိုယွင်းခဲ့ ပြီဆိုတာ မသိခဲ့ ပဲ ကိုး..။ မေတ္တာတုံးခံ ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးက တော့..၀ဋ်ကြွေး တစ်ခုကျေပြန်ပြီပေါ့..။ ကျေအောင်ဆပ်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဆိုပြီးကျေးဇူးတင်တတ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးဘူးတယ်..။
တကယ်တော့အပြစ်ညွှန်ပြတဲ့လူတွေကို ရွှေအိုး ညွှန်ပြတဲ့ လူလို သဘောထားရမယ်တဲ့..။ အပြစ်ကိုပြင်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရွှေအိုးရသလို..အကျိုးများစေတယ်ဆိုတာကို ကျေးဇူးတော် ရှုင်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တာပေါ့..ကလေးတို့ရေ..။
မေမေ့ကို စင်္ကပူ ရွှေတောင်ကုန်းရိပ်သာဆရာတော်(Vipassana Medtation Centre, VMC)က နှုတ်တိုက်ချပေးသင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်..။
ညံ့လျက်နဲ့ပင်တော်သည် ထင် ညံ့မြဲညံ့မည်ပင်..။
ဆရာမ ဒေါ်ခင်လှတင် ရဲ့ သင်တန်း ကို နာယူတဲ့ အခါမှ မေတ္တာကြိုတင်ကျင့်ဖွယ် ၁၅ချက်ကို သိခဲ့ရပါတယ်.ကလေးတို့ရေ..။ သားတော်ရာဟုလာလေး ဆိုရင် ဘုရားကျောင်းတော်မှာ..ကစားရင်တောင်သဲလုံးလေးတွေ မြှောက် မြှက်ပြီး
(ငါ့ ၏ အပြစ်ကိုပြောဆိုညွှန်ပြဆုံးမ မဲ့သူတွေ ဟာ သဲလုံးပမာ များပါစေလို့) ဆုတောင်းပါတယ်တဲ့..။
ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းတွေမှာ.. ကျေးဇူးတော် ရှင်ရွှေဟင်္သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက လင်္ကာလေးနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်..။
သားတို့ သမီးတို့၊ အပြစ်အနာအဆာ..။
ရွှေအိုး ညွန်တဲ့ ဆရာအဆူဆူ ဆုံဆည်းရလိုပါ..။
ကလေး တို့လည်း မေမေ နဲ့ အတူ..သုဝစော ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဖြည့်ကျင့်ရင်းရွှေအိုး တွေတူးဖော်ကြပါစို့..။နံပါတ်(၄) အချက် ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၁၄ချက်ကို ယုံကြည်ရိုကျိုးစွာလက်ခံ နိုင်မှာ မို့အရင်ရေးလိုက်ပါတယ်..ကလေးတို့..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:05 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သား သား နဲ့ မီးမီး
ကိုယ် နှုတ် ဖြောင့်မတ်ရမယ်..ဆိုတဲ့ ဥဇု နဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားကောင်းစွာဖြောင့်မတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သုဟုဇု ဆိုတဲ့ အချက် တွေ ဟာ တစ် တွဲ ထဲ ဆက် စပ်နေ ပါတယ်..။အဲဒီအချက် တွေဟာ မေတ္တာပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ရာ တွင်သာ မက လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာ အရေးပါတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာ ပိုင် ရှင် ရဲ့ နှလုံးအိမ်ဟာ သူတပါးကောင်းကျိုး လိုလားတဲ့ သဘောတရား တွေ အမြဲလွှမ်းမိုးဆောင်ယူ နိုင်နေ ရပါလိမ့်မယ်။
တရား ဆိုတာ ကလည်း ဓရ= ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ ပါဠိ စကားကဆင်းသက်လာတာဖြစ်လုိ့ ဆောင် ယူကျင့် သုံးနိုင်မှသာ တရားတကယ် ရတယ် ခေါ်လို့ရမှာပေါ့လေ။
မေမေတို့ လူ့ အသိုင် အ၀ိုင်းမှာ စကားပြောဆိုတတ်ဘို့ ကို စာအုပ်တွေရေးထားတာ ရှိပါတယ် Dale Carnegie ရေးတဲ့ How to win friends and influence to people ဆိုရင် အရောင်းရဆုံး Best Seller စာ အုပ် အဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာ ကြည့်ရင် လူတွေ စကားပြောပညာ အတွက် တော်တော် စိတ်ဝင်စားကြတာသိသာ ပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ပြောတာ မေမေမှတ်သားဘူးတယ်.ဗုဒ္ဓတရားတော် တွေဟာ ပြဿနာ တစ်ခု ချင်းကို ချဉ်းကပ်ဖြေရှင်းတာထက်..ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းသွားနိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်ကို ပေးလိုက်တာလို့ ဆရာ တော် က မိန့်ကြားဘူးပါတယ်..။
သည်တော့ မေမေ တို့ ကာ ယကံ၊ ၀စီကံ တွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ မနောကံ မှာ သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့ စိတ်ကို ဖြေင့်မတ်မှန်ကန်စွာ တည် ဆောက်လိုက်ရင် ပြော သမျှတရားသဖြင့်.လုပ် သမျှ တရားသဖြင့် ကာယကံ ၀စီကံတွေပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်..။
အနောက်တိုင်း စကားပုံတွေ ထဲမှာလည်း Honesty is the best policy လို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား။မြန်မာ မှုနယ်ပယ် မှာ လည်း အများကြီး ပဲပြဆိုထားခဲ့တာ..(ကောက်သော်စား မလောက်၊ ဖြောင့်သော် စားမကုန်)(ရိုးရိုးကျင့်၊ မြင့်မြင့်ကြံ)(အရိုးဆုံး သည် အဆန်းဆုံး)သားတို့က ပိုသိပါလိမ့်မယ်..။
Chinese Philosopher, Confucius ကလည်းပြောခဲ့တယ်..။ Sincerity and truth are the basis of every virtue. ကောင်းမှု ကုသိုလ် အာလုံးရဲ့ အုတ်မြစ်ဟာ ရိုးဖြောင့်မှန်ကန် မှု ဖြစ်တယ် တဲ့။
လိမ်လည် ကောက် ကျစ်တဲ့ ကာယကံ ၀စီကံတွေ ကင်းစင်နေမှသာ မေတ္တာ အစစ် အမှန် ကို ပွားများနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ၊ သူတစ်ပါး ရဲ့ မေတ္တာကို လည်း ခံယူရရှိ မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေး တို့ရေ။
တချို့က လိမ်လည် ကောက် ကျစ်တာ မဟုတ်ပေမဲ့လို့ သူတစ်ပါး အထင်ကြီးအောင် မရှိတဲ့ ဂုဏ်ကို ရှိ သယောင် ယောင် ဟန် ဆောင်တတ်ကြပါသေးတယ်။မေမေ လည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်..။ ကောင်းမှု ကုသိုလ် လုပ်တာ တောင် မှပဲ လူတွေ လာ မှ သမာဓိတွေသိပ်ကောင်းနေယောင် ဆောင်တာမျိုးတွေ က စပြီးတော့ပေါ့လေ။အမူ အရာ ပြင် လိုက် တာ မျိုး တွေ ဟာ မရိုးဖြောင့်တဲ့ သဘောတွေပါပဲ။
မေမေ တို့လည်း ကျမ်းစာတွေရေးတဲ့ အခါ ရာနှုန်းပြည့် ဥဇု ဖြစ်ဘို့ Plagiarism ကို တော် တော် သတိထားရပါတယ်။ မေမေဆို အဲဒီ ကျမ်းကိုး စာရင်း လုပ်ရတာ တာ မူးနောက် နေအောင်ပါပဲ။ Plagiarism ဆိုတာ သူတစ်ပါး ရေးပြီးသား တွေးပြီးသား စကားလုံးတွေ Idea တွေကို ကိုယ်ရေးသလိုမျိုး ကူး ယူ ဖော်ပြတာ ကို ခေါ်ပါတယ်။ မေမေတို့ စာတမ်းတွေရေးတဲ့ အခါ ဘယ် သူ ကတွေ့တာ ပါ.. ဘယ် လိုပြောတာ ပါ စသည်ဖြင့် ခုနှစ် အတိအကျ နဲ့ ကျမ်း ကိုး စာ ရင်းကို ဖော်ပြ မှသာ ဥဇု ဂုဏ် ပြည့်ုစုံ ပါလိမ့်မယ် ကလေး တို့ရေ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာဘုရားကြီးကတော့ ရာနှုန်းပြည့်ဖြောင့်စင်း ဘို့ဆိုတာ ရဟန္တာဖြစ်မှသာဖြစ်နိုငတယ်တဲ့။ မေမေတို့ တရားစခန်းတွေမှာ ဆိုခဲ့ရတာ..
ယုံကြည် ကျန်းမာ၊ ဖြောင့်စင်းစွာ နှင့်လွန်စွာအားထုတ်၊ နာမ် နှင့် ရုပ်ကိုဖြစ် ချုပ်သိမြင် ဤ ငါးအင် အမှန် ပင် မဂ်ရကြောင်း။ ဆိုပြီး အချက် ငါးချက် ပြည့်စုံမှသာ တရားရနိုင်ကြောင်း သင်ယူခဲ့ရပါတယ်..။
ဆရာတော် ဘုရားက ကိုယ် စိတ်ထဲ မှာ အချိန်ပြည့်တွေးတော နေတာ တွေကို သူများကို ပြန်ပြောနိုင်လား တဲ့၊ ပြန် မပြောရဲစရာ ၊ မပြောဝံ့ စရာ တွေ ရှိနေအုံးမယ် ဆိုရင် အမှန် တကယ် မဖြောင့်စင်းသေးကြောင်း ဟောခဲ့ဘူးပါတယ်..။ကိုယ့်ရဲ့ မဟုတ်မဟပ် အတွေးတွေကြောင့် တရားနဲ့ သန့်စင်နေတဲ့ ၊ တရားကိန်းဝပ်တဲ့ ခန္ဓာ အိမ်ကို မညစ်နွမ်းစေသင့်ကြောင်း ဆုံးမဘူးပါတယ်။
မေမေ wordpress ကို Computer Virus ကတားထားလို့ အရောင် နဲ့ အလှ မဆင် နိုင် မညှိ နိုင် တော့ဘူး.. သည်း ခံပေးပါ..။ဘယ်လိုလုပ်ရတာ သိရင်လည်း ပြောပြပါအုံး ကလေးရေ..။ဥဇု ၊ သုဟုဇု ဂုဏ် ပြည့် စုံအောင် အတူ ကြိုးစားကြပါစို့..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:16 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:11 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်